စုချစ်သူ: October 2008
မိမိမှာ ကျောင်းပြီးခါစ မန္တလေးမှာ အလုပ်လုပ်စဉ် မိဖများနှင့်ပါ လွန်စွာခင်မင်ရင်းနှီးသော အသိအစ်ကိုကြီး တစ်ဦးမှ ဖိတ်ကျွေးသည့် ညစာစားပွဲကို တက်ရောက်ခြင်းပြုခဲ့လေသည်။ အစ်ကိုတော်သည် စီးပွားရေးလောကတွင် အောင်မြင်နေသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ထိုညစာစားပွဲတွင် ဖိတ်ကြားထားသော သူ့အပေါင်းအသင်း စီးပွားရေးသမား အချို့နှင့် တွေဆုံခဲ့ရလေသည်။ ညစာစားပွဲကို နံမည်ကြီး စားသောက်ဆိုင် တစ်ခုမှာ ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က ခေတ်စားနေသည့် စားသောက်ဆိုင်က ကာရာအိုကေ သီချင်းသည်ပျိုလေးများကို မိမိမှာ ပထမဆုံးမြင်ဘူးခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ မိမိက အစားကောင်း၊ အသောက်ကောင်းများကို စားသောက်နေစဉ် ထိုပျိုဖြူလေးများမှာ သီချင်းတွေ တစ်ပုဒ်ပြီး တစ်ပုဒ်ဖျော်ဖြေနေလျက် အနှီပုရိသများ၏ ပန်းကုံးများကို ငံ့လင့်လျက်နေကြပေသည်။ မိမိစားပွဲဝိုင်းမှ ကျောက်ကုန်သည်ဆိုသူသည် ပန်းကုံးများ အမြောက်အများ ၀ယ်လျက် သမီးအရွယ်လောက် သီချင်းသည်မလေးများ၏ လက်ကို အားပါးတရ ဆွဲယူနမ်းရှုံ့၍ ပန်းကုံးများ ချီးမြင့်လေသောအခါ စားပွဲများတွင် ရှုစားနေသော အနှီပုရိသအပေါင်းတို့သည် ကောင်းလေစွဟု အရက်ခွက်များကိုမြှောက်လျက် လက်ခမောင်းများခတ်ကြကုန်လေ၏။ မိမိသည် ထိုပုရိသအပေါင်းအား မြင်ပြင်းများစွာကပ်လျက် ထိုကျောက်ကုန်သည်ကိုလည်း လွန်မင်းစွာ ရွံရှာခြင်းဖြစ်မိလေလတံ့။
စားပွဲဝိုင်းတွင် အစ်ကိုတော်က မိမိမှာ နိုင်ငံခြားခေတ်မှီဟော်တယ် တည်ဆောက်ရေးမှာ အလုပ်လုပ်နေသူ အင်ဂျင်နီယာ ဟု မိတ်ဆက်ပေးထားသဖြင့်အစ်ကိုတော်၏ မိတ်ဆွေများအားလုံးမှာ မိမိအား လူကြီးတစ်ဦးလို အရာသွင်းလျက် အလာပသလာပ စကားများ ပြောဆိုခြင်းပြုကြလေသည်။ မိမိက သီချင်းသည်မလေးများအား တစ်ဦးစီ အကဲခတ်၍ ထိုမိန်းကလေးများထဲတွင်လည်း မိန်းမကောင်းလေးများ ရှိနေနိုင်ကြောင်း၊ ယခုခေတ်ကြီးတွင် ကုန်ဈေးနူန်းများမြင့်တက် စားဝတ်နေရေးကအဆင်မပြေ၍သာ သူတို့မှာ ဤလို အလုပ်မျိုးကို လုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဆွေးနွေးမိလေသည်။ မိမိ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ တနေ့နေ့ တချိန်ချိန်တွင် မြန်မာပြည်ရှိ ခိုကိုးရာမဲ့၊ အလုပ်လက်မဲ့ အမျိုးသမီးများကို ပြုပြင်ထိမ်းသိန်း၊ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ဖို့ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့မို့ကြောင့် မိမိဝင်ငွေဖြင့်မတည်နိုင်အောင်၊ ငွေရအောင်ရှာကာ တတ်နိုင်သလောက် လူမှုရေး၊ ပရဟိတလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ချင်ကြောင်း စသဖြင့် ပြောပြရာတွင် အစ်ကိုတော်နှင့် မိတ်ဆွေများမှာ၊ ကာရာအိုကေ ကောင်မလေးများကို ကြည့်၍ မိမိစကားများကို ပြုံးပြီးနားထောင်နေကြလေသည်။
ထို့နောက် မိမိ၏လောလောဆယ် နိုင်ငံခြားသို့သွားရောက်အလုပ်လုပ်ရန် ကြိုးစားနေသည်ကို သိရှိသွားသော ပန်းကုံးများနှင့် ကျောက်ကုန်သည်က မိမိအား ဘာလို့ နိုင်ငံခြားကိုသွားပြီး ကျွန်ခံချင်ရတာလဲ၊ ကိုယ့်ပြည်ကိုယ့်မြေမှာလည်း အလုပ်လုပ်စားစရာတွေပုံလို့ဟုပြောပါသည်။ ထို့နောက်သူက ဆက်ပြောသည်မှာ သူသည်လည်း အင်ဂျင်နီယာ တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် သူသည် သူတပါးနိုင်ငံသွားပြီး ကျွန်တော့ မခံဟု ဆိုကာ ကိုယ့်ထူးကိုယ်ချွန်ကြိုးစားခဲ့သဖြင့် ယခုဆိုလျင် အောင်မြင်သော စီးပွားရေးသမားကြီးဖြစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း။ သူနှင့်အတူ ကျောင်းနေဖက်များမှာ ယခုချိန်ထိ နိုင်ငံခြားတွင် ကျွန်စုတ်တဲ့ သရက်စေ့ သာသာများသာ ဖြစ်နေကြကြောင်း... စသဖြင့် ကိုယ်ရည်များ သွေးလျက် ပန်းကုံးများကို မြှောက်ကာ မြှောက်ကာ၊ အရက်ခွက်ကို ဆကာ ဆကာဖြင့် ရယ်သံသွေးကာ ပြောဆိုနေလေ၏။ မိမိမှာ ထိုကျောက်ကုန်သည်၏ စကားများကို အော်ဂလီ ဆန်လှသည်ဖြစ်သော်လည်း ပညာရှိအမျက် အပြင်မထွက်နဲ့ဟူသော စကားအတိုင်း၊ မျက်နှာ မပျက်စေပဲ မည်သို့မည်ပုံ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျး ပြန်ပြောရမည်ကိုသာ စိတ်ထဲမှ အပြေးအလွှားတွေးတောလျက်ရှိသည်။
ထိုစဉ် မိမိတို့၏စားပွဲနှင့် မလှမ်းမကမ်းသို့ ဧည့်သည် အသစ်များရောက်ရှိလာလေသည်။ ထိုသူများမှာ မိမိထက်ပင် ငယ်ဦးမည့်ပုံဟန်ရှိသော လုလင်ပျိုတစ်ဦးနှင့် အပေါင်းအသင်းများဖြစ်ပေသည်။ ကျောက်ကုန်သည်မှာ အနှီလုလင်ပျိုအား အမှတ်မဲ့ လှမ်းမြင်လိုက်သောအခါ သတိအနေအထားကဲ့သို့ မတ်သွားလျက်၊ လက်ထဲမှ အရက်ခွက် နှင့် ပန်းကုံးများကို စိတ်သိမှတ်မှုကင်းမဲ့စွာပစ်ချလျက်၊ သခင်ကိုရုတ်တရက်တွေ့လိုက်သော သစ္စာရှိအိမ်စောင့်ခွေးလေးကဲ့သို့ အမြှီးလေးကုတ်လျက်၊ ထိုစားပွဲဝိုင်းသို့ သွားရောက်နှုတ်ဆက်လေသည်။ လုလင်ပျိုက ကျောက်ကုန်သည်အား တချက်မော့ကြည့်ကာ အရေးမစိုက်သည့်ဟန်ပြသော်လည်းပဲ အနှီကျောက်ကုန်သည်မှာ လက်ကလေး၂ဖက်နောက်ပို့လျက် ရို့ရို့ကလေးရပ်ကာ အမိန့်ကိုနာခံလျက်ရှိသော သစ္စာရှိကျွန်ယုံကဲ့သို့ ကျင့်ကြံလျက်ရှိနေပေသည်။ မိမိမှာ ထိုအဖြစ်အပျက်အား အံ့အားသင့်စွာ ငေးမောကြည့်ရှုလျက် အစ်ကိုတော်နှင့် စားပွဲဝိုင်းမှာ ရှိလျက်ကုန်သော လူကြီးလူကောင်းမင်းများထံမှ စုံစမ်းရာ ထိုလုလင်ငယ်ပျိုမှာ ကျောက်ကုန်သည်နှင့် စီးပွားရေးမကင်းရာမကင်းကြောင်းဖြစ်သော ၀န်မင်းတပါး၏ သားတော်ဖြစ်နေကြောင်း သိရှိရလေသည်။
အတန်ငယ်ကြာအောင် အမိန့်နာခံပြီးမှ ထိုကျောက်ကုန်သည်မှာ မိမိတို့ စားပွဲဝိုင်းသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာလေသည်။ ထို့နောက် အစ်ကိုတော်က မိမိအားအိမ်ပြန်လိုက်ပို့ရန် အားလုံးသော လူကြီးမင်းများအား နှုတ်ဆက်ကြရသောအခါ မိမိသည် ကျောက်ကုန်သည်အား "အန်ကယ်ရော... ကျွန်မခံရတာ သေချာရဲ့လား" ဟုမမေ့မလျော့ ကောင်းမွန်စွာ နှုတ်ဆက်ခဲ့လေတော့သတည်း။
Posted by စုချစ် at 10/30/2008 02:38:00 PM No comments:
သူငယ်ချင်းများ ... ၂
နောက် ရပ်ကွက်ထဲက သူငယ်ချင်း ၁ယောက်ကတော့ အိမ်နားမှာ စာအုပ်ဆိုင်လာဖွင့်ရင်းခင်တာ။ သူက ၈တန်း နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်မှာ သူ့အမေအစား ညနေဆို ဆိုင်ကို လာကူထိုင်ပေးလေ့ရှိတယ်။ သူ့နံမည်က "အေး" တဲ့။ သူကဖြူဖြူ သွယ်သွယ် ချောချောလေး...။ ညနေဆို... သနပ်ခါးလေးတွေ ညီနေအောင် မှုန်မှုန်လေးလိမ်းထားတဲ့၊ ဆံပင်ရှည်ရှည်စင်းစင်းလေးမှာ ပန်းလေးတွေ ပန်ထားတတ်တဲ့ သူ့ကို စာအုပ်လေးတွေ စီရင်း အပြုံးနုနုလေးပြုံးလို့ အမြဲတွေ့ရတတ်တယ်။ ကိုယ်က သူ့ဆိုင်မှာ ကာတွန်းတွေ ဋ္ဌားဖတ်ရင်းခင်တာ။ စာအုပ်ဋ္ဌားပြီးရင် ကိုယ်က ချက်ချင်းမပြန်သေးပဲ... သူ့ကို ကူပြီး စာအုပ်စီပေးတယ်။ လူရှင်းရင် စကားလေးဘာလေး ထိုင်ပြောကြပေါ့။ စာအုပ်ဋ္ဌားဖို့ ပိုက်ဆံမရှိလည်း စကားရောဖောရောနဲ့ အိတ်မှာထိုင်ပြီး အလကားဖတ်ပေါ့။
သူကချောတယ်ဆိုတော့ ရပ်ကွက်ထဲက ကောင်လေးတွေက ထုံးစံအတိုင်း ညနေဆို ဆိုင်ရှေ့လမ်းသလားတဲ့သူ သလား၊ စာအုပ်လာဋ္ဌားတဲ့သူကဋ္ဌား၊ မရှိတဲ့စာအုပ်ကို တမင်လာမေးတဲ့သူမေးနဲ့ ဆိုတော့ ဆိုင်ထဲမှာရော ဆိုင်ပြင်မှာပါ ကောင်လေးတွေနဲ့ အမြဲ တရုန်းရုန်းပါ့။ သူကလည်း လာတဲ့ သူတိုင်းကို၊ ပိုးတဲ့သူတိုင်းကို မခို့တရို့လေး ပြုံးပြုံးပြပြီး အသဲယားအောင် လုပ်လေ့ရှိတယ်။ တနေ့ ဆိုင်ဖွင့်ကာစ သူကစာအုပ်တွေစီနေတယ်။ ကိုယ်က ဆိုင်ရှေ့က ခုံတန်းလေးမှာ ထိုင်ပြီး ကာတွန်းတစ်အုပ်ဖတ်နေတယ်။ အိတ်အချိန် ကောင်လေး၃ယောက်လောက် ဆိုင်ရှေ့က ရုတ်တရက် ဖြတ်သွားပြီး ၀ှစ်ကနဲဆို တစုံတခုကို ဆိုင်ထဲ ပစ်ပေးသွားတယ်။ အဲဒါလေးက ဆိုင်ရှေ့ခုံတန်းလေးမှာ ထိုင်နေတဲ့ ကိုယ့်ခြေထောက်ရှေ့ကို ဘုတ်ကနဲဆိုပြီးကျလာတယ်။ ကိုယ်က ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ စာအိပ်ပန်းရောင်လေးက ခဲလုံးလေးနဲ့ တွဲချည်လို့...။
ဒါနဲ့... ကိုယ်လည်း... အေးရေ... ဟော့ဒီမှာတော့... လို့... မျက်စပစ်ပြ၊ မေးလေးနဲ့ ငေါ့ပြရင်း တပြိုင်ထဲ အိတ်စာအိတ်လေးကို ဘေးနားကမြောင်းထဲကို ခြေထောက်နဲ့ တခါထဲ ကန်ချပလိုက်မိတယ်။ အဖြစ်အပျက်က မြန်ဆန်လွန်းလို့ အေးက ကိုယ့်ကို တားချိန်မရှိလိုက်ဘူး။ ဟဲ့... ဟဲ့... မလုပ်နဲ့လို့ ခပ်အုပ်အုပ် သူတားတဲ့အချိန်မှာ စာအိပ်လေးက မြောင်းထဲ ခေါင်းထိုးပြီး ကျသွားပြီ။ ဗွက်တွေနဲ့ လူးကျံ နစ်နေပြီး ရေစီးရာမျောပါဖို့ ပြင်နေပြီ။ "အေး" ဟာ... ဆိုင်ထဲကနေ ပြာပြာသလဲ ထွက်လာ၊ မြောင်းထဲကျသွားတဲ့ စာကိုကြည့်၊ မျက်နှာလေးက မဲ့တဲ့တဲ့ နဲ့ ခြေလေးဆောင့်ပြီး ဆိုင်ထဲ ပြန်ဝင်သွားတယ်။ ပါးစပ်ကလည်း ပွစိပွစိနဲ့... ဘယ်သူက သူ့ကို အိတ်လိုလုပ်ခိုင်းလို့လဲ ဘာညာနဲ့... ပေါ့။
ကိုယ်လည်း မျက်နှာငယ်လေးနဲ့... ဘာလုပ်ရမယ်မှန်းသိဘူး။ သိဘူးလေ... အပျိုစဖြစ်ကတဲက အိမ်က လူကြီးတွေ လက်ချာပေးထားတာက ကောင်လေးတွေ စာလိုက်ပေးရင် ဘယ်တော့မှမယူရ။ စာထဲမှာ ရေးထားတာ ယောင်လို့တောင် ဖတ်မကြည့်ရ။ စာဖတ်ကြည့်ပြီးရင် လူ့စိတ်က သနားသွားတတ်တယ်... အဲသလိုကြောင့်...ဘယ်တော့မှ စာကို မဖတ်ရ။ ကိုယ်သိတာ... ဒါပဲ။ ဒီတော့ ဒီကလည်း အိတ်စာကို ကန်ချပလိုက်တာပေါ့လို့...။
ဒါပေမဲ့... သူ့ဆိုင်မှာ သူငြိုငြင်တာ မခံရဲတော့... ရွှေစုချစ်တို့လည်း တုတ်လေးတချောင်းရှာ... စာလေးကို ကမန်းကတန်း ပြန်ဆယ်ယူရတော့တာပေါ့။ ဗွက်တွေကို တတ်နိုင်သလောက် ခါထုတ်ပြီး ရော့ဟယ်လို့... ပေး... စိတ်တိုတာနဲ့... အိမ်ပြန်လာလိုက်ရော။ အဲဒီ ကတည်းက... အေးနဲ့ ကိုယ် စိတ်ကောက်ပြီး စကားမပြောကြတော့ဘူး။ နောက်... သူတို့ စာအုပ်ဆိုင်လည်း ပိတ်သွားရော... ပိုပြီး မတွေ့ဖြစ်ကြတော့ဘူး။
၁၀တန်းလောက် အရောက်မှာ အေးက ရပ်ကွက်ထဲမှာ စတားဖြစ်နေပြီ။ သူက အရမ်းလည်းလှလာတယ်။ ၁၀တန်းကို တဖုံးဖုံးကျပြီး ဟိုကောင်လေးနဲ့လည်း ဘာလိုလို၊ ဒီကောင်လေးနဲ့လည်း ဘာလိုလို...။ ဟိုမှာလည်း ဟိုလူနဲ့တွဲလိုက်၊ ဒီမှာလည်း ဒီလူနဲ့ တွဲလိုက် ရေရေရာရာ မရှိ လုပ်နေတာသိရတယ်။ နောက်ဆုံး သူ့ကို ကိုယ်တွေ့တာ ရပ်ကွက်ထဲက နံမည်ကြီး သူဌေးသား လူချောတစ်ယောက်နဲ့တွဲလို့။ အဲသာပြီးတော့ ကိုယ်... သူ့ကို မေ့သွားတယ်။ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လည်း မသိတော့ဘူးရယ်။
မနှစ်ကရန်ကုန်ပြန်တော့ ကိုယ်တို့အိမ်ကကားက လမ်းထဲ အကွေ့မှာ အမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက် တောင်းကြီးနဲ့ ဗြုန်းကနဲ ကားရှေ့ကပေါ်လာပြီး ... တိုက်မိတော့မလို့။ တော်သေးတာပေါ့... ဖေဖေက ကားကို အမြန်ဘရိတ်အုပ်လိုက်လို့...။ ကိုယ့်ဘေးက မမက... မရွှေစု...မှတ်မိလား... အဲဒါ"အေး"လေတဲ့...။ "အေး"ဟာ... ငယ်ငယ်တုန်းကလို မဟုတ် အသားတွေညိုလို့၊ ဆံစတွေက ဖရိုဖရဲနဲ့ ကွမ်းတွေစားထားတဲ့ ပါးစပ်ကလည်း နီရဲလို့၊ အပြုံးခပ်နွမ်းနွမ်းနဲ့ ကိုယ်တို့ကို လှမ်းကြည့်ပြီး လက်ကလေးကာပြ၊ တောင်းကြီး ခါးစောင်းတင်ပြီး ခပ်သွက်သွက် ထွက်သွားတယ်။ မမက အဲသာ... အေးရယ်လို့ ပြောလိုက်လို့သာ ကိုယ်မှာ ယုံလိုက်ရတာ။ ဘယ်လိုမှ မှတ်မိစရာအကြောင်းမရှိအောင် အေးက မိန်းမကြီးအသွင်ပေါက်နေတယ်။ မမရယ်... သူ... ကလေးဘယ်နှယ်ရောက်ရနေပြီလည်းလို့မေးတော့... နင်ကလည်း... ပေါက်ကရမေးဦးမယ်... သူက အပျိုကြီးဟဲ့... တဲ့လေ...။
Posted by စုချစ် at 10/26/2008 02:29:00 PM No comments:
စင်ကာပူမှာ .... ၃
အလုပ်သစ်တခု လျှောက်ပြီဆို လစာဘယ်လောက် လိုချင်လဲဆိုတဲ့... မျော်မှန်းလစာ (expected salary) ကို စလုံး ကုမ္ပဏီတော်တော်များများက တောင်းတတ်ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ (current salary) လက်ရှိလစာကိုလည်း ရေးခိုင်းတတ်ကြပါတယ်။ အိတ်တော့ သူတို့က ဘယ်လောက်ပေးရမလဲ မှန်းလို့ရအောင်လို့ပေါ့။ လက်ရှိလစာရတာထက် သူတို့က အများကြီးခွာမပေးချင်တတ်ကြဘူး... အများဆုံး ပိုပေးချင် ၅၀၀ ပါ။ ဒါမှမဟုတ် ၂၀% အများဆုံးပါ။ စလုံး၁၀၀၀ ပိုရဘူးတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်တော့တွေ့ဘူးတယ်။ သူက နောက်အလုပ်ထပ်လျှောက်တာ R&D မှာအလုပ်ရတော့ အရင် လစာထက် ၁၀၀၀ ပိုရဘူးပါတယ်။
မျှော်မှန်းလစာကို ဘယ်လိုတောင်းရမယ်မှန်းမသိရင် အကောင်းဆုံး အကြံမျှဝေပါ့မယ်။ ကိုယ်က အလုပ်ကလည်းလိုချင်... လစာ ပိုတောင်းလိုက်လို့ မခေါ်မှာလည်း စိုးတယ်ဆိုရင် Range နဲ့ တောင်းလိုက်ပါ။
Expected salary - 2800 ~ 3500
နောက်... သူတို့ ကိုယ့်ကို ကြိုက်လို့ ခန့်ပြီဆို ဈေးညှိကြပေါ့။ နည်းပြီးတောင်းမိရင် အလုပ်ဝင်ပြီးမှ လခထပ်တက်ဖို့ဆိုတာ ပိုခက်လို့ပါ။ စကတဲက များများရထားတာ ပိုစိတ်ချရတာပေါ့နော့။ တောင်းမိတာ နည်းသွားလို့ တောင်းရင် ရရက်သားနဲ့ မတောင်းမိလိုက်လေခြင်းဆိုပြီး အလုပ်ဝင်ပြီးမှ စိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေ တွေ့ဘူးလို့လေ။
Posted by စုချစ် at 10/25/2008 05:59:00 PM No comments:
သူငယ်ချင်းများ ... ၁
ငယ်ငယ်လေးနဲ့ ရီးစားထားကြတဲ့သူတွေ အကြောင်းပြောနေတာ ကြားရတော့... ထုံးစံအတိုင်း... ကိုယ်လည်း... ကိုယ့်သူငယ်ချင်းအကြောင်းလေးတွေ ဖောက်သယ်ချရဦးမယ်။
အိတ်တုန်းက ကိုယ်တို့က ၇တန်း၊ ၈တန်း... အပျိုပေါက်စနလေးပေါ့။ ဒါပေမဲ့... ကိုယ်က လူကောင်ခပ်သေးသေး၊ ဆံပင်က ဘိုကေ၊ လူပုံ မိုက်တိမိုက်ကန်း၊ သူများကိုကြည့်ရင် ရှုတည်တည်၊ ၀တ်တာက ရှပ်အင်္ကျီနဲ့ ဘောင်းဘီ ဆိုတော့ ကိုယ်လိုလူမျိုး ဘယ်သူမှ အပျိုစာရင်းမသွင်းကြပေါင်။ အဲ... ကိုယ်နဲ့တွဲတဲ့ သူတွေကတော့ ထမီခြေမဦးထိုးဝတ်၊ ဆံပင်လေးတွေ ဟိုချည် ဒီချည်၊ ခါးလေးတွေနွဲ့ပြီး လမ်းလျှောက်၊ ကောင်လေးတွေများတွေ့ရင် မျက်စမျက်နပစ်လို့... အပျိုဂိုက်စဖမ်းနေပြီဖြစ်တဲ့ မမလေးတွေပေါ့။ ကျောင်းက မြို့ထဲက လသာ၂မှာ တက်ရလို့ ရပ်ကွက်ထဲကသူငယ်ချင်းသိပ်မရှိပေမဲ့၊ အဲဒီ ၇တန်းကျောင်းပိတ်ရက် နွေရာသီမှာ ရပ်ကွက်ထဲက နံမည်ကြီး သင်္ချာကျူရှင်တခုတက်ဖြစ်လိုက်တော့ ရပ်ကွက်ထဲက သူငယ်ချင်းတွေ ရလာတယ်။
ကျူရှင်က စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ည ၇နာရီ တက်ရတာ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်တို့အားလုံး ၆နာရီလောက်ကတဲက ကျူရှင်ကို ရောက်နေကြပြီ။ ကိုယ်က ထုတ်ဆီးတိုးဖို့စိတ်ဝင်စားတုန်းမှာ သူတို့က ဇီးထုတ်စားရင်း ရုပ်ရှင်မင်းသားအကြောင်းနဲ့ ဟိုကောင်လေးက ဘယ်လို ဒီကောင်လေးက ဘာညာ အကြောင်းပဲ တွတ်ထိုးချင်ကြတယ်။ အတန်းမစခင် ထုတ်စီးတိုးချင်ပေမဲ့ ချွေးထွက်ပြီး အလှပျက်မှာ သူတို့က ကြောက်တတ်နေကြပြီ။ ကိုယ်ကတော့ သူတို့နဲ့ မပေါင်းရမှာ ကြောက်လို့ သူတို့ဒါဆို... ဒါလိုက်တာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းမိုးမိုးနဲ့ အိတ်ကျူရှင်အိမ်နားက ကောင်လေး၁ယောက်တို့ ဟိုလိုလို သည်လိုလိုနဲ့ သိပ်မကြာခင်မှာ ကြိုက်သွားကြရော။ မှတ်မိနေသေးတာ... အိတ်ကောင်လေးက လသာ၁က... သူ့ အိမ်နံမည်က သံချောင်းတဲ့။
တနေ့ကြတော့ ကျူရှင်က မီးပျက်နေရော။ မှတ်မှတ်ရရ... အိတ်နေ့က မိုးတွေ တအားရွာထားလို့ ရပ်ကွက်ထဲလမ်းတွေပေါ်မှာ ရေတွေလည်း ကြီးနေတာ။ ကျူရှင်က မီးပျက်နေတာ မတက်သေးရတော့ မိုးမိုး နဲ့ ခိုင်ခိုင်က ဒီနားခဏသွားစရာရှိတယ် လိုက်ခဲ့ဆိုပြီး အဖော်ခေါ်လို့ လိုက်သွားမိတယ်။ လမ်းတွေက မှောင်မှောင်မဲမဲနဲ့ ရေတွေထဲ ဖြတ်ပြီးသူတို့နောက် လိုက်ရတာ... လက်စပ်သတ်တော့ မရွှေမိုးက သံချောင်းနဲ့ ချိန်းတွေ့ဖို့ သွားတာကိုး။ ဟိုး... ရထားလမ်းဖက်က ခပ်စုတ်စုတ် အိမ်လေးတအိမ်ရှေ့လည်းရောက်ရော... သံချောင်းနဲ့ အမြဲတွဲနေကြ လုံးလုံးဆိုတဲ့ ကောင်လေးက ထွက်လာပြီး လာလာ... ဒီကိုလာ ဆိုပြီးထွက်ခေါ်တယ်။ အိတ်တော့ မိုးမိုးရယ်... အိတ်အိမ်မှောင်မှောင်လေးထဲကို ၁ယောက်ထဲ ၀င်သွားသတော့။ ကိုယ်ရယ်၊ ခိုင်ခိုင်ရယ်၊ လုံးလုံးရယ်က အိတ်အိမ်အပြင်ဖက်လမ်းပေါ်က ရေတွေထဲမှာ ရပ်ပြီးစောင့်နေကြတယ်။ ကိုယ်တို့ ကြောင်လိုက်ပုံက ခိုင်ခိုင့်ကို ... နင်ဝင်လိုက်သွားပါလား... ဟိုမှာ မိုးမိုး၁ယောက်ထဲ မှောင်ကြီးထဲ ကြောက်နေလိမ့်မယ်ပေါ့လို့ ပြောလိုက်သေးတယ်။ ခိုင်ခိုင်က ... အသာနေစမ်းပါဟယ်ဆိုပြီး ကိုယ့်ကို မာန်တယ်။
ကိုယ်ကအသာ မနေနိုင်ပါဘူး။ ကိုယ့်စိတ်ထဲ တော်တော်လေး အံ့သြနေတာ... ဘာလို့ ဒီမှောင်ထဲက အိမ်ထဲမှာ ချိန်းတွေ့လဲဆိုတာ နားမလည်နိုင်ဘူး။ မတော် သူ့လည်ပင်းညှစ်လိုက်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီး လန့်တာ။ (ဟီး... တခြားကိတ်စတော့ မသိသေးလို့... မပူမိဘူးတော့) ။ အဲသာနဲ့... ၅မိနစ်လောက်ကြာတော့ မိုးမိုးပြန်ထွက်လာအောင် အကြံထုတ်တာပေါ့။ ရေတွေထဲ ခြေထောက်ကိုလွှဲပြီး ဖိနပ်ဦးနဲ့ ခတ်... ခတ် ကစားရင်း အကြံထုတ်လိုက်တာ... တချက်... ဖိနပ်ကို တခါထဲ ခပ်ဝေးဝေး ကန်ထုတ်လိုက်တယ်။ ပြီးလည်းပြီးရော... အီး... ဖိနပ်ကြီး ရေထဲ မျောသွားပြီတော့... လုပ်ကြပါဦးလို့ အော်တာပေါ့။ ဖိနပ်အသစ်ကြီး... ရှာပေးကြပါ... ရှာပေးကြပါလို့ ခုနှစ်သံချီနဲ့ အော်လည်းအော်ရော... လုံးလုံးက ... ဟဲ့...ဟဲ့...အော်မနေနဲ့... ငါရှာပေးမယ်ဆိုပြီး ပြောလည်း ... မရပါဘူး။ ကိုယ်ကတော့ အော်တာပဲ။ နောက်ဆုံး... ဟိုအိမ်ထဲက ၂ယောက်ထွက်လာမှ အအော်ရပ်ပေးလိုက်တယ်။ မှတ်မှတ်ရရ ကိုယ့်ဖိနပ်တဖက်... အိတ်တုန်းက တကယ်ဆုံးသွားပါတယ်။ ရေတွေထဲ မျောသွားတာ ညကလည်းမှောင်နေတော့ ဘယ်လိုမှ ရှာမတွေ့တော့ဘူးရယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျေနပ်တယ်... မိုးမိုးက ထွက်လာတော့... ပြန်ကြမယ်ဆိုပြီး ကိုယ်တို့ အားလုံး... အိတ်က ပြန်လာကြတာပေါ့။ သံချောင်းနဲ့ လုံးလုံးကတော့ ဘာလို့ အိတ်ကောင်မလေးကိုခေါ်လာရတာလဲ။ နောက်ဆို ခေါ်မလာခဲ့နဲ့လို့ မိုးမိုးတို့ကိုမှာသတဲ့။ အိတ်နေ့က အိမ်ကို ဖိနပ်မပါပဲ ပြန်လာတဲ့ ကိုယ့်ကို ကျူရှင်မရှိတာ အိမ်ပြန်မလာပဲ ရွာရိုးကိုးပေါက်၊ ပေါက်လွှတ်ပဲစား လျှောက်သွားနေရသလားဆိုပြီး မေမေရိုက်တာ ခံလိုက်ရသေးသတော့။ အိတ်လို သူများရည်းစားချိန်းတာ အဖော်လိုက်ပေးတယ်ဆိုတာများ သိရင်တော့ မိုးမီးလောင်မှာ။
နောက်တော့ ကိုယ်လည်း ကျူရှင် မတက်ဖြစ်တော့လို့ သူတို့နဲ့ မတွဲဖြစ်တော့ဘူး။ သူ့ကိုလည်း ဖိနပ်အဆုံးခံပြီး ကယ်မဲ့သူမရှိတာနဲ့... မိုးမိုးဟာ ၁၀တန်းမှာပဲ ယောက်ျားနောက်လိုက်ပြေးသွားတယ်။ သံချောင်းနဲ့တော့ မှုတ်ဘူး။ အသက်၃၀မှာ ကလေး၃ယောက်နဲ့ သူ့ယောက်ျားဆုံးသွားတော့ မုဆိုးမလေး ဖြစ်ပြီးကျန်ခဲ့တာသိရတော့ တော်တော် စိတ်မကောင်းဘူး။ တနှစ်က ရန်ကုန်ပြန်တော့ သူနောက်ယောက်ျားယူလိုက်ပြီတဲ့။ သူ့နောက်ယောက်ျားကလည်း မုဆိုးဖို ကလေး၂ယောက်အဖေတဲ့။ ဒါပေသိ... နောက်ယောက်ျားက စီးပွားရှာကောင်းလို့ ရပ်ကွက်ထဲက ဖုန်းကြီးကျောင်းမှာ ကျောင်းဆောင်တောင် ဆောက်ပြီးလှူကြသတဲ့။
တောင်ရောက်...မြောက်ရောက် သူငယ်ချင်း ၁ယောက် အကြောင်းပေါ့....။
Posted by စုချစ် at 10/25/2008 12:18:00 PM No comments:
သူများတွေ ကဗျာစာအုပ်အကြောင်းတွေ ပြောတာ ဖတ်ရတော့ ကိုယ်လည်း ပထမနှစ်တက်ကာစ... ၁၆နှစ်သမီးအရွယ်သာသာက ဘုမသိ ဘမသိ ထုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ ကဗျာစာအုပ်လေးအကြောင်းကို ခုချိန်ထိ သတိတရနဲ့ လွမ်းနေမိပါသေးပါရဲ့။ အဲဒီ ကဗျာစာအုပ်လေး နံမည်က သံယောဇဉ်ဆူးတဲ့။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာတဲ့ထိ ရင်ထဲမှာ ညိနေသေးတဲ့ ဒီကဗျာအပိုင်းအစလေးကတော့...
ဒီကဗျာလေးကိုရေးတဲ့ သူငယ်ချင်းနံမည်ကတော့ ကိုသျှားတဲ့။ ကိုယ်က ဒီ ကဗျာစာအုပ်လေးနဲ့ပါတ်သက်ပြီး အများကြီးတော့ မကူညီခဲ့ဘူးဘူး။ ဒီစာအုပ်လေးထဲမှာ ကိုယ့်ကဗျာ၃ပုဒ်ပါဝင်ခဲ့၊ စာအုပ်ထုတ်ဖို့အတွက်... မရှိမဲ့၊ ရှိမဲ့ မုံ့ဖိုးလေး ၅၀ကို မျှဝေခဲ့...၊ ပြီးစာအုပ်ထွက်လာတော့မှ... ရော့...အင့်... ဆိုပြီး သူတို့က ကိုယ့်လက်ထဲထည့်... ဒါနဲ့... ဟိုလူ့ ဒီလူ့ လိုက်ရောင်းခဲ့တယ် ဆိုတာက ပိုမှန်မယ်။ ဒီဇိုင်းဘယ်သူဆွဲသလဲ...၊ လက်ရေး ဘယ်သူရေးသလဲ...၊ ဘယ်မှာ မိတ္တုလှည့်ကြသလဲ...၊ စာအုပ်တွေ ဘယ်လိုချိုးလို့ ဘယ်မှာ ချုပ်ကြသလဲ... ဘာမှ မသိလိုက်ဘူး။ အဲဒီကဗျာစာအုပ်မှာ ရေးတဲ့သူတွေ အားလုံးကိုလည်း ကိုယ်သိလည်းမသိဘူး။ တွေ့လည်းမတွေ့ဘူးဘူး။ ကိုယ့်ကလောင်နံမည်က ယောက်ျားလေး နံမည်ယူထားလို့ ဒီကဗျာ၃ပုဒ်ကို ရေးတဲ့သူဟာ ကိုယ်ဆိုတာ၊ မိန်းကလေး၁ယောက်ဆိုတာ သူတို့တွေလည်း မသိကြဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ ကိုယ့်မှာ ဒီကိစ္စကို အိမ်က လူကြီးတွေ မသိအောင် ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် လုပ်ရရှာသကိုး။
စာအုပ်လေးထွက်လာပြီးတော့ ညဖက်... ညဖက်... လူကြီးတွေ မသိအောင်... ခဏခဏ... ခိုးခိုး ကြည့်ခဲ့ရတာ သတိရမိတယ်။ ကိုယ့်ကဗျာလေးဘေးမှာ ရေးထားတဲ့ နဂိုဒီဇိုင်းကိုမကြိုက်လို့ ကိုယ့်ဖာသာ သရုပ်ဖော်ပုံလေးတွေ ထပ်ဆွဲတယ်။ ကဗျာစာအုပ်လေး မွမွကြေမတတ် ရေးထားတဲ့ ကဗျာတွေအားလုံး အထပ်ထပ်အပြန်ပြန် ဖတ်တယ်။ ဘယ်သူ့ကဗျာတော့ အကြိုက်ဆုံးရယ်လို့ အမှတ်တွေ ကိုယ့်ဖာသာပေးတယ်။ ဒါဟာ... ငါ့ရဲ့ စာပေဘ၀ခရီးအစ...ခြေလှမ်းတခုပဲလို့... ၁၆နှစ်သမီးဟာ... ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် စိတ်ကူးယဉ် မိခဲ့ဘူးတယ်။
Posted by စုချစ် at 10/24/2008 11:57:00 AM No comments:
Labels: Poem, Remembrance
Business email writing tips - 4
ရုံးအီးမေးလ်ရေးတဲ့နေရာမှာ သတိထားသင့်တဲ့ အချက်လေးများကို အလျင်းသင့်သလို ပြောဦးမယ်နော်။
အကောင်းမြင်တဲ့ အမြင်ဖြင့် ရေးပါ။
ဥပမာပြောရရင် ကလေးတွေကို ဆုံးမတဲ့နေရာမှာ သူလုပ်လိုက်တာမှားတယ်လို့ ပြောမဲ့အစား ဒီလိုလေးလုပ်ရင် ပိုကောင်းတယ်လို့ ပြောရမဲ့သဘောလိုပေါ့...။ ကလေး၁ယောက်က တံခါးကို ၀ုန်းကနဲဆောင့် ပိတ်လိုက်တယ်ထားပါတော့။ သူ့ကို ဘယ်လိုပြောမလဲ။ တံခါးကို ဘာလို့ဆောင့်ပြီးပိတ်တာလဲလို့ အပြစ်မပြောပဲ... တံခါးဆိုတာ ဖြည်းဖြည်းညင်ညင်သာသာ ပိတ်ရတယ်လို့ သူနားလည်အောင် အမှန်ကို တည့်မတ်ပေးမယ်ဆိုရင် ပြောတဲ့သူရော၊ ပြောခံရတဲ့သူပါ ကျေကျေနပ်နပ် ဖြစ်ပါတယ်။ သဘောကတော့....
the child needs to learn what’s right—not just what is wrong လို့ဆိုလိုချင်တာပါ။
ဒီသဘောအတိုင်းပါပဲ... အီးမေးလ်ရေးတဲ့ အခါမှာလည်း အပြစ်သဘောတွေမပါ၊ အပြုသဘောနဲ့ရေးသားတတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ၁ယောက်ယောက်က အမှားလုပ်လို့ သတိပေးပြောစရာရှိတဲ့အခါဆိုရင်လည်း သူ့အမှားကို ထောက်ပြအပြစ်ပြောတာထက် သူဘယ်လို အမှန်လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာ သူသဘောတူလာအောင် စည်းရုံးပြီး ရေးသားဖို့ ဂရုစိုက်ရပါမယ်။
အဲဒီတော့ ကိုယ်အီးမေးလ် ပို့လိုက်တဲ့သူဆီက Affirmative response ရချင်တယ်ဆိုရင် အပြုသဘောမျိုး ရေးသားတတ်အောင် ဂရုစိုက်ရပါမယ်။
1) Say what you want, rather than what you do not want
It will be great if we can haveacode released on this Tuesday, since production will run the test on this Tuesday. Please kindly help to expedite it.
We need the code released on this Tuesday. If we don't get the code on time from you, production cannot run the test. Please release it on time.
2) State what to do – not what to avoid
Please kindly provide the information within this week.
Don't take too long to provide the information more thanaweek.
3) Say what you can do – not what you cannot do
We will release the latest firmware code by end of this week and we are working on it.
We cannot release the firmware code by now; you need to wait until end of this week.
4) Use neutral rather than blaming language
Please let me clarify what I meant.
The test sequence can be improved further and please clear the unnecessary lines and resubmit. Thanks.
You created the test sequence very messy. Redo it.
6) Use words that createapositive feeling
We value the natural resources.
We don't waste natural resources.
7) Watch your tones
We are expecting the report from you. We would like to understand more on current Network problem and we hope that you can solve the problem as soon as possible. Please kindly help to expedite it.
I am regarding your failure to send the report. You claimed that network problem has been solved. But you haveaserious lack of insight into the problem.
(You claim လို့ပြောတာက "you say so, but I don't believe you." လို့ပြောလိုက်တာပါပဲ။ "failed to," "neglected to" or "lack of" စသဖြင့် words တွေက accuse အပြစ်တင်တဲ့ စကားလုံးတွေပါ။)
8 ) Motivate the people with your words whenever you have opportunity
Good job! We have received your latest released test code. You helped usasuccess on product launch on-time. Thanks for your hard work on it and hope to have your continuous support.
We have received the latest code released. Product has been launched.
9) Take every opportunity to communicate positively
We received your letter with thanks.
We got your letter.
Thank you for taking the time to consider my ideas.
Please review my ideas.
Posted by စုချစ် at 10/21/2008 01:42:00 AM2comments:
Labels: General Knowledge, Job, Office
Happy Birthday Brother Ko Min Ko Naing!
ဒီကနေ့... အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက် ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဟာ ဆိုရင် ကိုမင်းကိုနိုင် (ခ) ကိုပေါ်ဦးထွန်း ရဲ့ (၄၆) နှစ် မြောက်မွေးနေ့ရက်မြတ် ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုမင်းကိုနိုင်ကို ၁၉၈၉ မတ်လမှာ အကျဉ်းချခဲ့တာ၊ ၁၅နှစ်ကျော် ၁၆နှစ်နီးပါး အကျဉ်းကျခံခဲ့ရပြီး ၂၀၀၄ နိုဝင်ဘာမှာ ပြန်ည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၂၀၀၇ သြဂုက်၁၉ရက်မှာ ပြန်လည် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။
မိမိကိုယ်ကျိုးမငဲ့ပဲ မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေသော ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့်တကွ ဖမ်းဆီးခံနေရသော ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များအားလုံး အမြန်ဆုံး ပြန်လည်လွတ်မြောက်ပါစေရန် အစ်ကိုကြီးကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ ၄၆ နှစ်မြောက်မွေးနေ့လေးမှာ ၀ိုင်းဝန်းဆုမွန်ကောင်းများတောင်း၍၊ ဆုတောင်း မေတ္တာများ ပို့သကြပါစို့...။
သင်တို့ ရှိရာ ကျွန်ုပ်လာမည်
Posted by စုချစ် at 10/18/2008 11:33:00 AM No comments:
အညာစကား နဲ့ အကြေစကား
Artist - Saya T Naing Soe
အညာစကားနဲ့ အကြေစကား ကွဲလွဲတယ်ဆိုတာ ဖတ်ပြီး ၂၀၀၃-၄လောက် မြန်မာပြည်ပြန်ခဲ့တုန်းက ချောင်းသာ အလည်သွားခဲ့တာကို ပြန်သတိရလို့ တောင်ရောက်မြောက်ရောက်ရေးလိုက်ဦးမယ်....။
မြန်မာပြည်ကတောသူတောင်သားတွေဟာ ရိုးသားပြီး၊ ဟန်မဆောင်တတ်၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဟောဟောဒိုင်းဒိုင်း စကားပြောတတ်တာကိုပြောချင်လို့ပါ။ အိတ်တုန်းက ယောက်ယောက်ရယ် ကိုယ်တို့ ညီအစ်မ၃ယောက်ရယ် ချောင်းသာကိုအလည်သွားကြတာ...။ အပြန်ကျတော့ ဇက်ကူးဖို့က... (ဘာလို့ဆိုလည်း... ဗွီအိုင်ပီဆိုလား... ဘာလား... ရှိလို့ဆိုပြီး ) အကြာကြီးထိုင်စောင့်ခဲ့ရတယ်...။
အဲဒါနဲ့ကိုယ်တို့တွေလည်း... မြစ်ဆိပ်မှာပဲ လ္ဘက်ရည်ဝင်သောက်... ပြီးတော့ အိတ်ဆိုင်ရှေ့ အရိပ်အောက်က ထိုင်ခုံလေးတွေမှာ ထိုင်ပြီး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် စကားတွေ ရေပက်မ၀င်အောင်ပြော... ပြောင်လိုက်နောက်လိုက်နဲ့ နေနေကြတာပေါ့။ အိတ်မှာ ကိုယ်တို့ စကားပြောတဲ့ အနားကို ထန်းလျက်သည်တွေ ရောက်လာကြတယ်။ ထန်းလျက်ရောင်းချင်လို့ အနားကိုရောက်လာကြတာမှုတ်ဘူးနော်။ ကိုယ်တို့ အချင်းချင်း ပေါက်ကရ ပြောင်နေနောက်နေကြတာကို စိတ်ဝင်တစားတွေနဲ့... ပထမတော့ ခပ်လှမ်းလှမ်းက အကဲခတ်သလိုကြည့်... နောက်တဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာကြည့်။ ပြီးလည်းပြီးရော... ကိုယ်တို့နားက အရိပ်အောက်မှာ ပြုံးပြုံး... ပြုံးပြုံးနဲ့ ဗန်းတွေချပြီး တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက်လာထိုင်ကြတော့တာပဲ။
ကိုယ်တို့တွေ ပြောနေကြတာကို... ငေးမောနားထောင် ရီမောရင်း သူတို့ကပါ စကားတွေ ၀င်ပြောကြတာလေ။ အဲဒါနဲ့ သူတို့တွေက ကိုယ်တို့ကို ဘယ်လိုတော်စပ်ကြသလဲဆိုပြီး မေးတာပေါ့နော်။ ကိုယ်နဲ့ ယောက်ယောက်ကလည်း ကိုယ့်ညီအစ်မတွေနဲ့ အတူတူခရီးသွားကြတယ်ဆိုရင် ၂ယောက်လုံး အပျို၊ လူပျို ဟန်ဆောင်ကြတာလေ... ဟီး...။ ပြီးတော့... ရုပ်ချင်းကလည်း ခပ်ဆင်ဆင်တွေမို့... မောင်နှမတွေ တော်တယ်လို့ ပြောရင် လူတိုင်းယုံကြတယ်။ ယောက်ယောက်ကို လက်ညိုးထိုးပြပြီး... ဒါ... မောင်လေး အငယ်ဆုံးလေးလို့ ပြောကြတာပေါ့။ ညီမလေးကိုတော့ လက်ညိုးထိုးပြီး... ဒါကတော့... အစ်မအကြီးဆုံးလို့ လုပ်ကြတာပေါ့... ခစ်ခစ်။ အိတ်တော့... သူတို့တွေက ညီမလေးကို ၀ိုင်းကြည့်ကြပြီး ... ဟယ်... ကောင်မက... အစ်မအကြီးဆုံးတဲ့တော့... မထင်ရဘူးတော့တဲ့။ ကောင်မဆိုတော့ ညီမလေးက စတွန့်သွားတယ်။ နောက်ထပ်စကားလည်းကြားရော... ကိုယ်တို့တွေ မပြုံးပဲ ၀ါးလုံးကွဲကို ရီမိလိုက်ကြတယ်။ သူ့အပြောက... ကောင်မမျက်ခွက်ကလည်း လှပါ့အေ... တဲ့...။
လှတယ်လည်းဆိုသေး... ပြောတာကလည်း မျက်ခွက်တဲ့... ဟိဟိဟိ...။ ဒါနဲ့ သူတို့ကို ဘယ်အရပ်ကလည်းဆိုတာ မေးကြည့်တော့ သူတို့က အထက်အညာဒေသကဆိုပဲ။ သူတို့ ရွာနံမည်ပြောပြတာတော့ မေ့သွားပြီ။ သူတို့တွေ ကိုယ်တို့နဲ့ တ၀ါးဝါး တဟားဟား... စကားတွေ ကောင်းနေကြတာ... ဟိုမှာ နောက်ထပ် ခရီးသည်ကားတွေ လာနေတယ်... ထန်းလျက်သွားရောင်းကြချည်လေ ဆိုလည်း ထိုင်ရာကမထကြဘူး။ နေပစေ... ကိုယ်တို့နဲ့ စကားပြောရတာပျော်တယ်တဲ့။ ဒီနေ့အတွက်လည်း ရောင်းထားတာ နေ့တွက်ကိုက်နေလို့တဲ့။ တကယ့်ကို ဘယ်မှသွားမရောင်းပဲ ကိုယ်တို့တွေဇက်ကူးတဲ့ထိကို စကားထိုင်ပြောကြတာ။ ဘာတွေ မေးကြ... ပြောကြလည်း... ဆိုတာ... အတိအကျပြန်စဉ်းစားကြည့် တော့ ရေးတေးတေးရယ်။ ဒါပေမဲ့... ကိုယ်တို့က ပေါက်ကရတွေ ပြောလိုက် သူတို့ကရီလိုက်။ သူတို့ ရိုးရိုးကြီးပြောတာကို ကိုယ်တို့ကရီလိုက်ကြနဲ့။ သူတို့ဘ၀အကြောင်း... စိတ်ညစ်စရာလေးတွေကို ပြောပြတာတောင်မှ သူတို့က ရီကာမောကာနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပုံစံလေးတွေနဲ့ ပြောပြကြတာကိုတော့ မှတ်မိနေတယ်။
အိတ်ကပြန်လာပြီးကတဲက... ယောက်ယောက်က တခါတခါ... နောက်လေ့ရှိတယ်...။ ငါ့မိန်းမက မျက်ခွက်က လှသားပဲတဲ့.............. လေ။
မေ့လို့...။ ချောင်းသာကအပြန်... သူငယ်ချင်းတွေ၊ အမျိုးတွေကို လက်ဆောင်တွေဝေတော့... အားလုံးက အံ့သြပြီး... ဟယ်..ချောင်းသာမှာ ထန်းလျက်ပေါသလားတဲ့.....................။ ဇီးထန်းလျက်၊ အုန်းထန်းလျက်၊ ပေါက်ပေါက်ဆုတ် ထန်းလျက်၊ ရိုးရိုးထန်းလျက်... အမျိုးစုံအောင်ကို ပါလာတာလေ...။
Posted by စုချစ် at 10/17/2008 02:13:00 PM No comments:
Labels: Fun, Myanmar
စုချစ်ရေးထားတာကို ဖတ်ပြီး ရင်ထဲမှာ ကြည်နူးလွန်းလို့၊ စုချစ်ယောက်ယောက် အတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင် အဖြစ် ကဗျာလေးရေးပေးမယ်နော်။
စုချစ်ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ ကို အခုမှ ဖတ်ဖြစ်တယ်။ စုချစ်ရော... ကို--- ကိုပါ ခင်နေ၊ တွေ့ဖူးတဲ့ သူတယောက် အနေနဲ့ စုချစ် ရေးထားတာလေး နဲ့ မျက်လုံးထဲမှာ မြင်ကြည့်တာလေးနဲ့ တော်တော် ကို ကြည်နူးမိပါတယ်။
နောက်တခု က စုချစ်နဲ့လေဒီ ညတိုင်းနီးပါး စကားပြောဖြစ်တဲ့အခါတိုင်း၊ တခါတလေ နောက်နေ့မှာ ပိတ်ရက်မျိူးဆို တို့တွေ ၂ယောက် ည သန်းခေါင်ကျော် ပြောရင်တောင် မှ စုချစ် အိပ်မှ အိပ်တယ် ဆိုပြီး၊ ဘေးနားမှာ ထိုင်စောင့်နေတတ်တဲ့၊ ကို--- ကို ကျေးဇူးတင်မိတယ်၊ စုချစ်တို့ကိုလဲ အားကျမိတယ်။
ဘန်ကောက်မှာတွေ့ကြ တုန်း ကလဲ ကျူးပစ်တွေ အမ်ဖိုးအမ် နဲ့ ကျူးပစ်ထဲ ကအကြောင်း ပြောမ၀ ဖြစ်နေချိန်မှာ ပြုံးပြုံး နဲ့၊ စကားမစပ် အဲဒီတုန်းက ပါလာတဲ့ နောက်ကျူးပစ် စီနီယာ တယောက်ရဲ့ ပါရမီဖြည့်ဖက် ကိုလည်း တယ် ချီးကျူးပါတယ်။
လေဒီကိုလည်း အမြဲတန်းအားပေးတတ်တဲ့စုချစ်၊ ဂရုစိုက်တတ်တဲ့ စုချစ်၊ ဒီလို ဂရုစိုက်ခွင့်ပေးတဲ့ စုချစ် ယောက်ယောက်၊ ယနေ့ မွေးနေ့မှသည် စုချစ်နဲ့တူတူ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ၊ အဘိုးအဘွားများတောင့်တနေတဲ့ သားသမီးလေးတွေ နဲ့အတူတူ၊ ဒီနေ့လိုပဲ ဇင်ယော်ချိန် လေးတွေချည်းပဲ တသက် လုံး လှပ ပျော်ရွှင်နေပါစေလို့။
စုချစ်တင်စား ကို... အား
တူစွ ရွှေဇင်ယော်...။ ။
ကာရံသိပ်မကိုက်ပေမဲ့.. အမှတ်တရပါ.. အခုချက်ခြင်းရေးချလိုက်လို့။
အမှတ်တရ ကဗျာရေးပေးသော ချစ်သူငယ်ချင်းလေဒီအား ကျေးဇူးတင်ခြင်းများစွာဖြင့်...။
Posted by စုချစ် at 10/16/2008 10:10:00 PM No comments:
Hubby! Happy Birthday, It's for U!
I met one charming guy around 1995-96 at Mandalay who became my lovely hubby in future. Actually, we were same batch University mates. But we've never talked before, back in University time even though we have seen each other around the University. I was from Electrical Engineering while he was from Petroleum Engineering.
We became closed friends when we were working together for Sedona Hotel Project, Mandalay after we've graduated. As per usual man-approaching method, he said that he sees me as his younger sister so he wants to treat me like one. He always helps me on everything I need and he is always there for me. He pretended that he would never fancy me. But he couldn't pretend any longer and he proposed me after5months we met.
He used to give me one beautiful red rose on every Thursday because both of us are on Thursday born. Sometimes, he gave it to me personally if nobody was around. Sometimes, he put it into my desk. I don't like red color rose but I like the rose from him. Most of the presents given to me are always red color and he said that his favorite color is red. Although red color is not really my favorite, I don't mind to get red color presents from him. Anyway, I also like him….I don't really know "what is love" but I am sure that I like him very much, especially on his being honesty, humble, being big heart, and sweet smile. Although I am aware that he won't be the most perfect person surrounded me.
Now, we have been married for 6years and going to be7years on this November. We still don't have any kids yet. He is still the same as before…..honest, humble, big heart and sweet smile. But I became to know some of his "bad" characters after we get married which I've never realized before. Sometimes, he is very forgetful person. Something like ….left his wallet in his office, left his hand phone in somewhere…etc. And he likes to have everything best of the best. No matter how expensive, he will get it for me or he will get it for himself too and he doesn't care about anything. He always has no worries and just an easy go happy person.
Occasionally, he would like to spend money on those stuffs likeawatch, shoe, etc., which are usually very very expensive (as for me). Initially, I was very disappointed and don't understand why he wants to have suchabranded stuff since we are just normal people and honestly....not high class - rich people. He also wanted to buyacar, which will definitely cost usalot extra money in every month. So, I did totally disagree with him to buyacar and arguing with him that it was just wasting money. But finally, as usual and like always, I let him do what he likes to do……because, he is my only and one hubby and I don't want him to be upset but only to be happy.
Actually, he isn't only my hubby but also my partner, my brother, my friend, my teacher, my father and my son. According to circumstances, he behaves different characters in my life since we are away from our family's members. He also treats me as different characters since he also needs me in different ways. Most importantly, we fill each other needed in anytime and anyway. We valued each other and treasured each other everyday and every possible moment.
One of the his precious characters I like and very rare to find in this world is……He is very cool guy and he never gets angry easily. In short, his boiling point is very good while mine is poor. He seldom says bad things about others except he often scolds to those people whenever he thinks about Daw Aung San Su Kyi, Burmese political prisoners and Burmese people who are inatragic plight. He is very kind to everybody whoever associates with him. Especially, he is very good in taking care of his subordinates and workers; no questions for that…of cause they like him very much too. But I think that some people are taking granted for his kindness. So I have to become bad person in order to protect him, sometimes.
My hubby also wants to travel around the world. He often follows and visits me the place, which I occasionally go for oversea work assignments. Whenever he sees planes, he always says that he wants to take that plane and flies somewhere to admire the scenery, season, culture, etc. When I said that you're always thinking how to spend money but never think how to save money then he didn't reply me anything but just smiling.
My angry or my worry is gone whenever I see his smile. That's my hubby and me.
16-10-2008, Thursday, 09:50 am
Posted by စုချစ် at 10/16/2008 11:20:00 AM4comments:
Labels: Family, Personnel
ပြေး... အချစ်ရေ... ပြေး
ကျောင်းအစ်မကြီးဝိသာခါ အကြောင်းဖတ်ပြီးတော့ ငယ်ငယ်က အဖွားပြောတာတွေ သတိရမိတယ်။ ကိုယ်တို့မောင်နှမတွေမှာ မိန်းကလေးတွေက များတော့ မိန်းကလေးတွေဘယ်လိုနေရမယ်၊ ဘယ်လိုထိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ အဖွားပြောတဲ့ စည်းကမ်းတွေကလည်းများသားပါ့။ အားလုံး... လိုက်နာသလားမေး... လစ်ရင်လစ်သလို... လည်သလို ကြည့်နေကြတယ်လို့ ဖြေရမယ်နဲ့တူတာပဲ။အဖွားရဲ့ စည်းကမ်းတွေထဲမှာ မိန်းကလေးတွေ အော်ကြီးဟစ်ကျယ် စကားမပြောရ မရယ်ရ၊ ပြေးလွှားမသွားရဆိုတာတွေလည်းပါသပေါ့။ သူတို့သမီးထွက်ရှာစဉ် ကျောင်းအစ်မကြီး ၀ိသာခါရဲ့ အိနြေ္ဒကြီးပုံဆိုတာလည်း အဖွားပြောပြဘူးခဲ့တယ်။ ကိုယ်တို့ မောင်လေးဝမ်းကွဲက ကိုယ်တို့ကို ဘယ်လို သြဘာပေးခဲ့လည်းဆိုတော့ ... နင်တို့လိုပုံမျိုးတော့ သေချာတယ်... ဘယ်သူမှ သူတို့သမီးကောက်ကြမှာ ဟုတ်ဘူးတဲ့လေ...။ သူပြောလည်းပြောစရာ... ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ ... အယ်... ရွှေစုချစ်တို့က ဘာပြေးသလဲမေးပါနဲ့လား..ကွယ်ရို့...။
ငယ်ငယ်က လာသာ၂ မှာကျောင်းတက်တော့ ရထားကြီးစီးပြီး တက်ရတာ...။ ရထားက တခါတလေ ပုံမှန်ချိန်ထက် စောလာလို့ ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေ ရထားလာနေတာတွေ့... ကိုယ်က ဘူတာရုံမရောက်သေး။ ကျောင်းလိုက်ပို့တဲ့ အဒေါ်က ထမင်းဘူးခြင်းတွေတို့လို့တန်းလန်းနဲ့ သူကိုယ်တိုင်လည်းပြေး... ပါးစပ်ကလည်း.... ဟဲ့... ကလေးတွေ ရထားမှီအောင်ပြေးကြ...ပြေးကြဆို...လွယ်အိတ်တွေ မနိုင်မနင်းလွယ်လို့ ခြေကုန်သုတ် အပြေးလိုက်ခဲ့ဘူးသပေါ့။ ရန်ကုန်မှာ ဘတ်စ်ကားစီးဘူးတယ်ဟုတ်...။ ကိုယ်က ဒီနေရာမှာ စောင့်နေတယ်ဆို... ကားက ဟိုနေရာ.. ခပ်လှမ်းလှမ်း မှာရပ်တယ်။ စပယ်ရာက ခပ်မြန်လေးလာလို့ ဆိုပြီး အော်ခေါ်ရာ အပြေးအလွှား သွားရတာ...။ အိတ်မှာ ဆင်မယဉ်သာလုပ်နေလို့ကတော့.... နေခဲ့ပေရော့ပဲ...။ ဒါမှမဟုတ်လည်း... ကိုကို စပယ်ရာတို့ရဲ့... အမလေး.. လှယဉ်ကျေးမယ်ရွေးပွဲလုပ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ... ခပ်မြန်လေးလာကြပါလို့... အာပြဲသံကြီး ရောက်လာမှာ မလွဲပဲ...။ ပြီးတော့ရော.. ကားလမ်းကူးကြတာ အရှေ့အနောက် တောင်မြောက် ဘယ်ညာ ကိုယ့်ဖာသာကြည့်ပြီး အပြေးအလွှား ကူးကြရတာ...။ လူတွေ အများကြီး ပြေးပြေးလွှားလွှားကူးနေတဲ့ နေရာ ကိုယ်ပါရောပြီး ပြေးလွှားကူးပေါ့...။ ဒါမှ လိုရာမြန်မြန်ရောက်မယ်...။
တက္ကသိုလ်ရောက်တော့ရော... အထူးသဖြင့်... ပထမနှစ်မှာ အတန်း တချိန်ပြီးတိုင်း အပြေးအလွှားနဲ့ နေရာတွေ ဦးခဲ့ကြတာမှတ်မိနေတယ်။ Building 1 ကနေ Building 8 - Drawing အတန်းအကူးအပြောင်း တက်ရတဲ့ အချိန်တွေဆို ဘာပြောကောင်းမလဲ...။ လှေခါးကနေ တဒိုင်းဒိုင်းပြေးဆင်းကြတာပဲ။ တီစကွဲတွေ ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ အပြိုင်လုပြီး သွားဌား..။ နောက်ကျလို့ နေရာက နောက်မှာထိုင်ရရင် ဆရာပြောတာတွေ သေချာမကြားရတော့ပဲ ကျူတိုရီယယ်ကြရင် ဒွတ်ခရောက်ရော...။ ဘယ်မှာ ဆင်မယဉ်သာလုပ်နိုင်ပါ့မလဲနော်...။ လုပ်တဲ့သူ မရှိဘူးတော့ မဟုတ်ဘူး..ရှိပါတယ်...။ တနေ့တော့ အိတ်လိုလှုပ်လီလှုပ်လဲ့ လမ်းလျှောက်တတ်တဲ့ သူငယ်ချင်း၁ယောက်နဲ့ (သူက..သူ့နောက်လိုက်နေတဲ့ လူကြီးတွေ ကြောက်လို့ အတန်းနားတဲ့အချိန် Physics Department မှာ စာအုပ်သွားယူစရာရှိလို့ အဖော်လိုက်ခဲ့ပေးတာခေါ်တာနဲ့... လိုက်ပေးတာ) အတူလိုက်လျှောက်ပေးရတာ။ ဒီကလောက် ကော်ရစ်တာ ဘယ်ညာမှာ ထောင်သောင်း မျက်လုံးတွေ စူးစိုက်ကြည့်နေတဲ့ကြား၊ သကောင့်သားတွေက... ဟေ့ဟား... အော်နေကြတဲ့ကြားမှာ သူက လှုပ်လီလှုပ်လဲ့ ကဗျာမမှီစာမပီ စတိုင်နဲ့ ဆင်မယဉ်သာလျှောက်နေတာ...ကိုယ်ကစိတ်မရှည်တော့ဘူး...။ ကဲ..နင်... လမ်းမြန်မြန် လျှောက်မလား... မလျှောက်ဘူးလား။ အိတ်လိုလုပ်နေရင် ကိုယ့်ဖာသာ နောက်ကလိုက်ခဲ့တော့...။ ငါ့ဖာသာ ရှေ့ကသွားနှင့်မယ်လို့ ရာဇသံပေးလိုက်တော့မှ... မရွှေစာက ကိုယ့်လက်မောင်းကို ဖက်ပြီး နောက်က တရွတ်တိုက်ပါလာတယ်။
အင်း... ခု...စလုံးရောက်လာတော့ရော...။ ကိုယ်အလုပ်စလုပ်လုပ်ခြင်းတုန်းက စီးနေကြ Express ကားက နာရီဝက် ၄၅မိနစ်ကြာမှ တစီးလာတာ...။ အိုးး...ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင် မရောက်သေးပဲ အိတ်ကားမြင်လိုက်လို့ကတော့ ... Forest ပြေး...ပြေး... ဆိုတာက အသာလေးပဲပေါ့...။ ဘတ်စ်ကား ဒရိုင်ဘာ ဦးလေးကြီးကလည်း ကိုယ်ပြေးလားတာတွေ့ရင် ရပ်စောင့်ပေးသဗျ...။ တလောက... ရုံးကနေ စောစော အပြန် ဘတ်စ်ကားစီးဖို့ ဂိတ်ကို ထွက်လာတုန်း ဟိုဖက် Department က မန်နေဂျာနဲ့ တွေ့လို့ သူကလည်း စောစောပြန်တယ်ဆိုပြီး ၂ယောက်သား စကားတပြောပြောနဲ့ ထွက်လာကြတာ..။ ကိုယ်တို့ စီးမဲ့ ဘတ်စ်ကားကြီးလာနေတာတွေ့တော့ ကိုယ်က မှီအောင်ပြေးတာပေါ့။ မဟုတ်ရင် တစီးလွတ်သွားရင် odd hour အချိန် မှာ နာရီဝက်လောက် စောင့်ရတတ်လို့...။ ဟာဟ... ကိုယ်က ရှေ့က... အိတ်မန်နေဂျာက နောက်ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာရယ်... ။ ကိုယ်တို့ ပြေးလာတာတွေ့တော့ ဘတ်စ်ကားဆရာကြီးက စောင့်နေတာပေါ့...။ ကားပေါ်လည်းရောက်ရော.... နောက်မှရောက်လာတဲ့ အိတ်မန်နေဂျာကို ဘတ်စ်ကားဆရာကြီးက ဗလိုင်းကြီး ဆူပါလေရော...။ မိန်းကလေးက အရင်ပြေးပြီး တက်ရတယ်... မင်းက ဘာလို့ နောက်ကနေ ဖြည်းဖြည်းလေး လှုပ်လီလှုပ်လဲ့ လာတာလဲဆိုပြီး..။ ဟိဟိ..။ အိတ်လိုပဲ ... MRTစီးတော့လည်း လှေကားမတက်ခင် Display က ၁မိနစ်လို့ ပြထားရင် Excuse me လို့ ပြောပြီး escalator ကို ပြေးတက်တာပဲ...။
ရုံးအလုပ်နဲ့ ဂျပန်ကို ရောက်ခဲ့တုန်းက... မနက်.. မနက် ဘူတာရုံ အသွားမှာ ရုံးသွားဖို့ ထွက်လာတဲ့ ဂျပန်တွေတော်တော်များများဟာ... လမ်းရိုးရိုးလျှောက်တာထက် ပြေးပြီးသွားကြတာတွေ့ရတယ်...။ ဟိ... ကိုယ်ကလည်း သူတို့ နဲ့ အပြိုင်...လိုက်ပြေးတာပဲ...။ နောက်ပြီး... ဟိုးအရင် ပထမဆုံးအခေါက် US ကိုရောက်တုန်းက ကိုယ်သွားတဲ့ မြို့က State တွေအားလုံးမှာ အအေးဆုံးလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ မြို့...။ အိတ်တုန်းက wind chill temperature (လေတိုက်ခတ်နှုန်းနဲ့ အအေးဓါတ်ပေါင်းသွားပြီး ရလာတဲ့ temperature ) -၃၀ နဲ့ -၄၀ ဒီဂရီ စီ လောက်ကို ကြုံခဲ့ဘူးတယ်။ ရုံးအပြင်က ကားပတ်မှာ ကားရပ်ပြီးရင် ...လာလေရော့... ကားကနေ ရုံးဆီကို တခါထဲ ဒိုင်ဗင်ထိုးချမတတ် ပြေးတော့တာပဲ...။
အင်း...မောင်လေးပြောခဲ့သလိုပါပဲ...။ ဒီလိုပုံမျိုးကို... ဘယ်သူကလာပြီး သူတို့သမီးကောက်မလဲပေါ့ကွယ်....။ ဒါပေမဲ့... ခစ်ခစ်ခစ်..................... ကံကောင်းလို့... ကျောင်းအစ်မကြီး ၀ိသာခါတို့ခေတ်မဟုတ်တော့လို့... ကောက်တဲ့သူကကောက်ခဲ့လို့.. တော်သေးရဲ့....။ ဟိ...
Posted by စုချစ် at 10/09/2008 11:04:00 AM No comments:
တရုတ်မလေးအကြောင်းပြီးတော့ အဆောင်က ပြင်သစ်မအကြောင်းလေး ဆက်လိုက်ဦးမယ်။ သူများ မကောင်းကြောင်းတွေလိုပဲ ဖြစ်နေလို့ ရေးရတာ အားတော့နာပါရဲ့။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်မြင်တာ သိတာကနေ သင်ခန်းစာလေးတွေ ယူနိုင်အောင်လို့ပေါ့နော်...။
အဲဒီ ပြင်သစ်မလေးက အသက် ၂၃- ၂၄ လောက် ...။ အရပ်ကရှည်သွယ်သွယ်၊ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် ခပ်ဖြောင့်ဖြောင့်၊ ပုခုန်းလောက်ရှိတဲ့ ရွှေညိုရောင်အဆင်း ဆံလေးတွေ တခါခါနဲ့ ချစ်စရာ အပျိုဖြန်းလေးပုံစံနဲ့ပေါ့...။ မြစိမ်းရောင်လဲ့လဲ့ မွှေးညှင်းနုနုလေးတွေနဲ့ မျက်နှာလေးဖြူသေးသွယ်ပေါ်က မျက်ခုံးတန်းလေး ညိုလဲ့လဲ့၊ မျက်ဝန်းလေး စိမ်းပြာပြာ၊ နှာတန်လေး သေးချွန်ချွန်၊ နှုတ်ခမ်းနီလေး ပါးလျလျနဲ့ မြင်သူအပေါင်းလည်း ငေးမောမိရတဲ့ ဘိုမလေးပေါ့။ ကိုယ်ဟန်ကျော့ကျော့မော့မော့နဲ့ စကပ်တိုတိုလေးတွေဝတ်လေ့ဝတ်ထရှိတဲ့၊ စပေါ့ရှူး ခပ်လှလှလေးတွေစီးတတ်တဲ့သူ ကျောင်းသွားဖို့ (ဒါမှမဟုတ်) အပြင်သွားဖို့ အပေါ် ထပ်က ဆင်းလာပြီဆို ကိုယ်နဲ့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတို့ လုပ်လက်စ အလုပ်တွေ ခဏထားပြီး သူမသိအောင် သူ့ကို မော်ဒယ်မလေးတစ်ယောက်ကိုငေးကြည့်သလို မျက်စိတဆုံးလိုက်ငေးဖို့ ၀န်မလေးကြဘူး။
ဒါပေမဲ့ ချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ သတ်မှတ်ခဲ့သမျှ မထင်မှတ်ပဲ သိလိုက်ရတဲ့ သူရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကြောင့် ကိုယ့်အနေနဲ့ စိတ်မသက်မသာဖြစ်မိခဲ့တာ အမှန်ပဲ။ အခု... စင်ကာပူမှာ အောက်တိုဘာ ၁ရက်ကစပြီး ဘတ်စ်ကားခတွေ၊ ရထားခတွေ ဈေးတက်တယ်ကြားတော့ မဆီမဆိုင် သူ့ကို သတိရမိလိုက်တယ်။ သူကလေးသာ ဒီမှာ ရှိနေတုန်းဆို ခုလိုဈေးတက်နှုန်းနဲ့ ဘယ်လို Cheating များ လုပ်ဦးမလဲလို့လေ။
ဟိုးအရင်တုန်းက စင်ကာပူမှာ Ez Link ကဒ်ဆိုတာမျိုး မရှိသေးဘူး။ ရိုးရိုးဘတ်စ်ကားကဒ်ကို ကိုယ်သွားမဲ့ လမ်းခရီးပေါ် မူတည်ပြီး စက်ထဲထည့် ကိုယ့်ဖာသာရွေးဖြတ်ရတာ။ ဘယ်လောက်ဖြတ်ရမယ်မှန်းမသိရင် ကားဆရာကြီးကို ကိုယ်ဆင်းမဲ့ မှတ်တိုင်ပြောပြပြီး ကားခဖြတ်ရတယ်။ လျှော့ပြီး ဖြတ်ထားတာဆိုရင် လတ်မှတ်စစ်တက်လာတဲ့အခါ ကိုယ်လက်မှတ်ကိုယူသွားပြီး ခရီးစဉ် အစအဆုံးထိ ဖြတ်ပစ်လိုက်တော့ ပိုက်ဆံ ပိုကုန်တာပေါ့နော်။ အဲ...တခြားတော့ ဘာမှ မပြော... မလုပ်ပါဘူး။ ဒီတော့ တချို့သော သူများဟာ ဘယ်ပဲသွားသွား အနည်းဆုံးခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး လွယ်လွယ် နဲ့ ကားခခိုးစီးလေ့ရှိကြတယ်။
အဲဒီမှာ ... ခုပြောမဲ့ ပြင်သစ်မမလေးက လက်မှတ်ဖိုးလျှော့ပေးပြီး အမြဲ ခိုးစီးသူပေါ့။ သူက NUS မှာ Exchange Student အနေနဲ့ ကျောင်းတက်နေတဲ့သူ။ ကိုယ်တို့အဆောင်ကနေ ကျောင်းကို ၁ဒေါ်လာကျော်ကျော် ပေးရတာကို သူက အနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ ပြား၆၀ပဲပေးပါတယ်။ ကိုယ်တို့က ပထမတော့သူမသိလို့ လုပ်တာလို့ ထင်တာပါ။ ကျောင်းအသွား တကားထဲ အတူတူ စီးမိစဉ် သူက ကိုယ့်ရှေ့က တက်ပြီး ပြား၆၀ပဲဖြတ်တော့ အော်..သူ..ကျောင်းကို သွားတာမဟုတ်... လမ်းတနေရာမှာ ဆင်းမယ်လို့ ထင်တာပေါ့။ ကျောင်းရောက်လို့ ကားပေါ်ကအဆင်း သူလေးက ကိုယ့်ရှေ့က ဆင်းတာ တွေ့လိုက်ရတော့မှ... အာ... ဒီကောင်မလေးတော့ ကားလတ်မှတ်ဖိုးမှားဖြတ်နေပြီလို့ လွယ်လွယ် တွေးလိုက်တာပေါ့နော်။
သဟာနဲ့... သူကကိုယ့်ရှေ့က ပြာယာပြာယာ ထွက်သွားတော့ ဒီအကြောင်းကို မပြောလိုက်၊ သတိမပေးလိုက်ရဘူး။ တနေ့ ကိုယ်အဆောင် ဧည့်ခန်းထဲမှာရှိတုန်း သူက အင်္ကျီလျှော်ဖို့ ဆင်းအလာ... မနေနိုင် မထိုင်နိုင်နဲ့ စကားစပ်မိအောင် အတင်းစပ်ပြီး အဆောင်ကနေ ကျောင်းကို ဘတ်စ်ကားခက ပြား၆၀မဟုတ်ဘူး...နော်..။ ၁ဒေါ် လာကျော်လို့ ရီကာမောကာ ပြောပြလိုက်တယ်။ ဒီတော့ သူက အေးအေးဆေးဆေး... မထူးဆန်းတဲ့ပုံနဲ့... သူသိသားပဲ... တမင်မပေးတာတဲ့လေ...။ ကျောင်းမှမဟုတ်ဘူး... သူ... ဘယ်သွားသွား ကားခကို အနည်းဆုံးပဲဖြတ်တယ်။ ဘာလို့ပို ဖြတ်ရမှာလဲ... လက်မှတ်စစ်လာရင်လဲ... ငါ...ခုမှ ပြင်သစ်ကရောက်တာ..မသိလို့ လုပ်မိတာလို့ ပြန်ပြောမှာပေါ့တဲ့...။ ငါတို့ လူမျိုးတွေကို ဒီကလူတွေက တော်တန်ရုံ မပြောရဲပါဘူးတဲ့လေ...။ ငါတို့က နိုင်ငံကြီးသားတွေတဲ့... တော်ရုံတန်ရုံလူ ရှိန်တယ်တဲ့လေ...။ သူကပြောရင်းဆိုရင်း ကိုယ့်ကိုလည်း ဂရုမစိုက်တဲ့ အိုင်တင်နဲ့ ဘတ်စ်ကားခ အပြည့်ပေးစီးရတဲ့သူ... သနားစရာ သတ္တ၀ါတွေပဲဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ ဆတ်ကော့လတ်ကော့ အပေါ် ထပ်ကို တက်သွားတယ်။
သူ့အပြော ကြားလိုက်ရတဲ့ ကိုယ်တို့တွေကတော့ သူ့ကို တအံ့တသြ လိုက်ကြည့်မိကြရင်း အတော်ကို စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ ခေါင်းတွေယမ်းမိတယ်။ တနေ့မှာတော့ သူနဲ့ အိမ်ရှိလူအားလုံးပြဿနာ ဖြစ်ကြရတယ်။ သူ့ရဲ့ ရွှံ့တွေသဲတွေနဲ့ ပေပွပြီး ညစ်ပတ်ပေရေနေတဲ့ စပေါ့ရှူးကို အ၀တ်လျှော်စက်ထဲ ထည့်လျှော်တဲ့ ကိစ္စနဲ့ပါတ်သက်ပြီး မိုးလင်း ကျောင်းသွားတာတောင် မျက်နှာမသစ်တဲ့ ပြည်ကြီးတရုတ်မမ မညစ်ပတ်ကအစ ဒေါမကန်စဖူးဒေါတွေကန်နေကြတယ်။ သူက ဖိနပ်ပေပေရေရေကို အ၀တ်လျှော်ကန်ထဲ ဒီတိုင်းပစ်ထည့်သွားတာလေ။ ခလုတ်နှိပ်ဖို့ မေ့သွားတာပဲလား... တွေ့တဲ့သူ၊ မနေနိုင်တဲ့သူ လုပ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီး ဒီတိုင်းတမင်ထားသွားတာပဲလားတော့ မသိဘူး။ နောက်က အ၀တ်လျှော်ချင်တဲ့သူ ကဘယ်လို လျှော်ရမယ်မှန်းမသိ။ ဒီလောက်ပေပွနေတဲ့ ဖိနပ်ကို အရင်ဆုံးရေ မဆေးပဲ ထည့်တာကိုက လွန်လှပြီ။ ပြီးတော့ ကိုယ်က စည်းကမ်းဒလကြမ်းပြည့်နေတဲ့ မိသားစုကလာတော့ အဆောင်ကလူတွေ အ၀တ်လျှော်စက်ထဲ ပေါက်ကရအကုန်ထည့်ပြီး လျှော်တာကအစ လုံးဝကြိုက်တဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ အများနဲ့ ၁ယောက် ..အများပိုင်ပစ္စည်း.. သူတို့လျှော်ချင်ရာလျှော်တာ ကိုယ်ဘာများပြောလို့ရမှာလဲ။ ကိုယ်ကတော့ အဲဒီအချိန်ကစပြီး ပြင်သစ်မမကို ကြည့်ချင်စိတ် ကုန်ခန်းသွားတော့တာပဲ။ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ သူ့ကိုလှတယ်လို့ ခံစားလို့ မရတော့တာလည်း အမှန်ပဲ။
သူ့အကြောင်းနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ဆက်စပ်တွေးမိတာက နိုင်ငံကြီးသားဆိုတာ ဘာလဲ... ဆိုတာပါပဲ။ ဘာသာရေးအရ ခိုးစီးတာဟာ မကောင်းတဲ့အလုပ်လို့ မသိတာကို အသာထားဦး...။ အဲဒီလို ကလိန်ကညစ် လုပ်တတ်တဲ့အကျင့်နဲ့၊ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ စရိုက်တို့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ပုံစံနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နိုင်ငံကြီးသားလို့ ပြောရတာ ရှက်စရာကောင်းတယ်လို့ သူမထင်မိဘူးလား။ အခြားတိုင်းတပါးသားများက ကိုယ်၁ယောက်မကောင်းတာနဲ့ ကိုယ့်လူမျိုးအားလုံးကိုပါ အထင်သေးသွားစေနိုင်တယ်ဆိုတာ သူမသိလေရော့သလား။ ငါလေ... စင်ကာပူမှာ ကျောင်းသွားတက်တဲ့ တောက်လျောက် ဘတ်စ်ကားအမြဲခိုးစီးခဲ့တာလို့ ပြင်သစ်ရောက်ရင် ပြန်ကြွားချင်လို့ပဲလား။ ဒါမှမဟုတ်... ငါ့ရဲ့ ညစ်ပတ်ပေရေနေတဲ့ ဖိနပ်တွေ ကို ကိုယ်တိုင်တောင် ဆေးစရာမလိုဘူး..။ ဒီလိုပဲ ပစ်ထားလိုက်တာ.. တွေ့တဲ့သူက လုပ်ပေးသွားတာ လို့ ဂုဏ်ယူချင်နေလား...ဆိုတာ ကိုယ်ကတော့ မဝေခွဲနိုင်ပါ။ သေချာတာ တခုကတော့ နှစ်တွေကြာသွားတဲ့အခါ အဆောင်ကလူတွေ အားလုံးဟာ သူ့နံမည် ဘယ်သူဆိုတာကို မေ့သွားကြမှာဖြစ်သော်လည်း ... တို့လေ... အဆောင်မှာ နေခဲ့တုန်းက ပြင်သစ်မ ၁ယောက်ပေါ့... ဆိုပြီး - သူ့နိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုလို့ - သူကောင်းခဲ့တာ၊ မကောင်းခဲ့တာလေးတွေကို သတိရမိတဲ့ အခါတိုင်း၊ တိုက်ဆိုင်မှုရှိလာတဲ့အခါတိုင်း ပြောဖြစ်နေကြမှာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ကိုယ့်ဘ၀မှာ ပထမဆုံး နီးနီးစပ်စပ် တွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ ပြင်သစ်မ လှလှလေးဟာ... ကိုယ့်အတွက် memory လှလှလေး မချန်ခဲ့တာကလည်း အသေအချာပါပဲလေ။
တခြားတပါးသော တိုင်းပြည်ကိုရောက်နေသူများအတွက် ကိုယ်ဟာ ကိုယ့်လူမျိုးကို ကိုယ်စားပြုနေတဲ့သူ ဆိုတာ မေ့ပစ်လို့ မရပါဘူး။ ကိုယ်ကကောင်းတာလုပ်ခဲ့ရင် အဲဒီကောင်းတဲ့အရိပ်က ကိုယ့်တမျိုးသားလုံးကို ကိုယ်စားပြုကျန်နေခဲ့မှာ ဖြစ်ပြီး၊ ကိုယ်က မကောင်းတာလုပ်မိခဲ့ရင် အဲဒီအရိပ်မဲက ကိုယ့်ကိုယ်စား ကိုယ့်နောက်မှာ ကိုယ့်လူမျိုးနံမည်နဲ့ချီပြီး ကျန်နေခဲ့မယ်ဆိုတာ သတိချပ်သင့်ပါတယ်။
မည်သူမဆို ... ကောင်းသော အရိပ်များ ချန်ခဲ့နိုင်ကြပါစေသော်...။
Posted by စုချစ် at 10/07/2008 09:38:00 AM No comments:
Labels: Essay, Singapore
တနေ့ကမှ... ဂျူးရောင်းအိစ်မှာနေတဲ့ သှုငယ်ချင်း နဲ့တွေ့လို့ သူကပြောပြတာ...။ စက်တင်ဘာ ဒုတိယပတ်လောက်က သူ့အိမ်အောက်ထပ်တည့်တည့်အခန်းက ၀ါယာရှော့ ဖြစ်ပြီး မီးလောင်တာ ကံကောင်းလို့ တတိုက်လုံးမလောင်တယ်တဲ့။ အောက်ထပ်ကအိမ်က Renovation လုပ်နေတာ... အဲဒီနေ့မှာ Contractor တွေက Flat TV ကြီးနံရံမှာဆင်ပြီး မီးခလုတ်တွေ မပိတ်ပဲ ပြန်သွားကြတာ...။ ညကြတော့ ရှော့ဖြစ်ပြီး မီးလောင်ရော..။ သူတို့က ၃ထပ်ကဆိုတော့ ပြေးဆင်းကြတာ...။ ဟိုးအပေါ် ထက်ကလူတွေ တော့ ပြေးဆင်းလို့ကို မမှီကြတော့ဘူးတဲ့လေ။ မီးခိုးလုံးကြီးတွေ တက်သွားတာ တော်တော်များတယ်ဆိုပဲ။ သူတို့တွေ အောက်ထပ်ကနေ ကြည့်နေပြီး သူတို့ အိမ်တော့ ပါသွားပြီထင်တာတဲ့။
နောက်မီးအေးမှ ပြန်တက်ကြတော့ သူ့အထပ်က မီးခိုးလုံးရိုက်ပြီး တအိမ်လုံးမဲသဲသွားတာပေါ့။ ကြမ်းခင်းတွေဆိုလဲ ပျက်စီးသွားတယ်တဲ့။ HDB Insurance က အပြင်နံရံတွေဆေးပြန်သုတ်ပေးတာနဲ့ တံခါးဘောင်တွေ ပျက်စီးတာပဲ လုပ်ပေးတယ်တဲ့။ အခန်းထဲ ပျက်စီးတာ ဘာမှ လုပ်မပေးဘူးတဲ့....။
မောင်နှမတွေ...သတိထားနိုင်အောင်လို့ ပြောတာ။ အပြင်ထွက်ပြီးဆို... သတိရှိရှိနဲ့ မီးခလုတ်တွေ အားလုံးပိတ်ခဲ့ကြဖို့ မမေ့ကြပါနဲ့။ ဂတ်စ်မီးဖိုတွေ ဘာတွေလည်း ခလုတ်ကိုမေ့ပြီး မပိတ်မိလို့ ဆိုပြီး ဂတ်စ်တွေ ထွက်နေတတ်တယ်။ အားလုံး..သတိရှိရှိထားကြလို့ နှိုးဆော်လျက်။
Posted by စုချစ် at 10/06/2008 02:16:00 PM No comments:
ဘာရယ်ဟုတ်ဘူး....တောင်ရောက်မြောက်ရောက်တွေးရင်း နဲ့ စလုံးရောက်ကာစ အဆောင်မှာ နေတုန်းက တရုတ်မ၁ယောက်ကို သတိရသွားလို့....။
ကိုယ်စလုံးကို ရောက်ကာစ... နေခဲ့ရတဲ့ အဆောင်က လုံးချင်းအိမ်လေးတွေ၊ အောက်ထပ်မှာ ၁ယောက်ခန်း ၁ခန်း နဲ့ ၂ယောက်ခန်း ၁ခန်း၊ မီးဖိုဆောင်၊ ဧည့်ခန်း။ အပေါ် ထပ်မှာက ၂ယောက်ခန်း ၃ခန်း။ အဲဒီ အပေါ် ထပ်မှာ ပြည်ကြီး တရုတ်မ ၄ယောက်၊ ပြင်သစ်မ ၁ယောက် နဲ့ မလေးတရုတ်မ ၁ယောက်နေကြတယ်။ အောက်ထပ်မှာက ကိုယ်တို့ မြန်မာ ၃ယောက်နေကြတယ်။
ပြောချင်တာ အဲဒီအပေါ် ထပ်က လူတွေ အကြောင်း။ အဲဒီထဲမှာ ပြည်ကြီးမ ၄ယောက်က ကိုယ်စီ ဇာတ်လမ်းမျိုးစုံနဲ့...။ ဗမာပြည်ကလာတဲ့ ကွန်ဇာဗေးတစ် ရိုးရိုးစင်းစင်း မိသားစုက ကြီးပြင်းလာရတဲ့ ကိုယ်ကတော့ ရောက်ကာစက သူတို့နေပုံထိုင်ပုံကို ကြည့်ပြီး အဘား...အဘား နဲ့ အော်နေရ... မီးမီး ရှက်ရှက်လို့ လက်ကာထားရ... ဖြစ်နေတာပေါ့။ သူတို့ထဲက၁ယောက်ရဲ့ အကြောင်းလေးပြောချင်လာလို့...။
သူက NUS က ဓာတုအင်ဂျင်နီယာရင်းမှာ မာစတာလုပ်နေတဲ့ ကောင်မလေး။ သူ့ရည်းစားကောင်လေးက အဆောင်ကို အမြဲအလည်လာလေ့ရှိတယ်။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေလိုနေ့မျိုးဆိုရင် ကောင်လေးက နံနက် ၁၀နာရီ ကိုယ်တို့ မီးဖိုထဲမှာ ချက်ချိန်ပြုတ်ချိတ်လောက်ဆို ရောက်လာပါပြီ။ သူက အဆောင်ထဲကို မ၀င်ခင် တံခါးဝကနေ မ၀ံ့မရဲ့၊ မတိုးမကျယ် အသံ နဲ့ ဟယ်လို...လို့ အမြဲ ခေါ်လေ့ရှိတယ်။ အပေါ် ထပ်က သူ့ကောင်မလေးကတော့ ဘယ်ကြားပါ့မလဲ...။ ကိုယ်တို့ ကြားတဲ့သူ... ကြုံတဲ့သူတွေက သူ့ကို လက်ကလေး ခဏကာပြ... ပြီးတော့ လှေကားရင်းကနေ သူ့ကောင်မလေး နံမည်ကို အော်ခေါ်ပေး။ အိတ်တော့မှ... ပြုံးပြုံး... ပြုံးပြုံးနဲ့ ကောင်မလေးကဆင်းလာ။ သူ့ကောင်လေး လက်ကို ဆွဲပြီး အပေါ် ထပ်ကို ခေါ် သွားပေါ့။ မရွှေစာကသာ ဘယ်သူ့မှ အရေးမလုပ်တာ။ ကိုယ်တော်ချောကတော့ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဟန်နဲ့ ကိုယ်တို့ကို မလုံမလဲကြည့်... စိုင်းကျူး...လို့ တရုတ်သံဝဲ၀ဲနဲ့ပြောပြီး အပေါ် ထပ်ကို ပါသွား။ အဲဒါ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် မြင်နေရတာ ကြာလာတဲ့အခါ ကိုယ်တို့အတွက် ထူးတောင်မထူးဆန်းတော့ဘူး။ ဒီတရုတ်လေးက အရပ်ကရှည်ရှည်မားမား၊ ရိုးသားမှုရှိတဲ့ မျက်လုံးတစုံနဲ့ ရှက်ကိုးရှက်ကန်း ဟန်တွေ ရှိလို့ ကိုယ်တို့ မြန်မာ၃ယောက်လုံး သူ့ကိုတော့ ဘာရယ်မဟုတ် ခင်နေမိကြတယ်။
အဲ... တနေ့ညခင်း ၁၀နာရီကျော်လောက် ဧည့်ခန်းထဲမှာ ကိုယ်စာထိုင်ဖတ်နေတုန်း မရွှေချော ပြန်လာတာတွေ့ရတယ်။ သူ့နောက်က သူတို့ လူမျိုး အသက်ခပ်ကြီးကြီး လူကြီး၁ယောက်နဲ့...။ ဒီလူကြီးက ကိုယ့်ကို ဟယ်လို ဆိုပြီး ပြုံးပြနှုတ်ဆက်တာကို လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတိုင်း ခေါင်းငြိမ့်ပြီး ဟန်ဆောင်ပြုံးလေးတောင် ကိုယ်ပြန်မပြုံးပြနိုင်လိုက်မိဘူးထင်တယ်။ မရွှေချောကတော့ ကိုယ့်ကို စာဖတ်နေတာလား လို့ တချက် နှုတ်ဆက်ပြီးသကာလ ကိုယ့်ရှေ့ Fridge ထဲက အအေးဗူးတဗူးကို ထုတ်ယူလို့ ဘာမှ မဖြစ်သလို လူကြီးလက်ကိုဆွဲလို့ အပေါ် ထပ်ကို တက်သွားတယ်။ ဒီလူကြီးက လည်း ပိုင်စိုးပိုင်နင်း ခပ်တင်းတင်းနဲ့ ကိုယ့်ရှေ့ကဖြတ်လျှောက်လို့ အပေါ် ထပ်ကို လိုက်ပါသွားတယ်။ တကယ်ဆို အဆောင်မှာ ညအိပ်ညနေ လူလက်ခံခွင့်မရှိတာ သူတို့ မသိလေရော့သလား။ ကိုယ့်မှာသာ လက်ထဲက စာအုပ်ကိုဆက်မဖတ်နိုင်တော့ပဲ သူတို့ တက်သွားတဲ့ လှေခါးရှိရာကို... စိတ်တိုတောင်းစွာ လိုက်ကြည့်နေမိတယ်...။ ဒါ...ဘာသဘောလဲ....။ ဘာလုပ်တာလဲ...။ အခန်းထဲက ကိုယ့်သူငယ်ချင်းကို ခေါ်ပြီး ပြောလိုက်သေးတယ်...။ ဟိုဖက်အခန်းက နောက်သူငယ်ချင်းကလည်းထွက်လာပြီး ကိုယ်တို့ ၃ယောက် ပွစိပွစိ စကားတင်းဆိုကြလေတာပေါ့။ အိမ်ကို လူလိုက်လာလို့ စိတ်တိုတာထက် ... ကိုယ်တို့ ဘော်ဒါ တရုတ်လေးမျက်နှာကို မြင်ယောင်နေကြပြီး စိတ်တိုကြရတာကပိုတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်တို့ အံ့တာက တခန်းထဲမှာ တခြားမိန်းကလေး ၁ယောက်နဲ့ အတူနေရတာ။ သူတို့ဘဲကို အခန်းခေါ် သွင်းတာကတော့ အံ့ရော...အံ့ရော..ဆိုတာပါပဲ။ သူ့အခန်းဖေါ်တရုတ်မက ဘာ ကွန်ပလိမ်းမှ မလုပ်တာလဲ... အံ့ရော...အံ့ရော...ပဲ။
ဒါနဲ့ပဲ... အဲဒီနေ့ကစလို့ ကိုယ်တို့ရဲ့ တရုတ်လေးဟာ.. ပျောက်ချင်းမလှ ပျောက်သွားပြီး အဆောင်ကို ဒီလူကြီးက အမြဲရောက်ရောက်လာတယ်။ သူက NUS ကပဲ အီးအီးမှာ PhD လုပ်နေတယ်ဆိုပဲ။ ကိုယ်တို့ကတော့ ဒီလူကြီးမျက်နှာကို ကြည့်ရတာ တရုတ်ကားတွေထဲက ဗီလိန်မျက်နှာနဲ့တူလို့။ မျက်နှာကအမြဲ အဆီပြန်ပြန်... အရပ်က ပုကွကွ.. အသက်ကလည်း ကြီးကြီး...။ ဒီ တရုတ်မ ဘာမြင်ပြီး သဘောကျရသလဲဆိုတာ နည်းနည်းမှ စဉ်းစားလို့ မရဘူး။ တခုပဲ ရှိတယ်.... ဒီလူကြီးရောက်လာမှ ကိုယ်တို့မှာမီးဖိုဆောင်ကို သူမချက်ခင် ရအောင်ဦးရတယ်။ ဒီလူကြီးက အချက်အပြုတ်ကတော့ နံပါတ်၁ ပဲ။ ခါတိုင်းဆို တရုတ်မတွေ ချက်လို့ ကိုယ်တို့ကို လာကျွေးရင် နည်းနည်း ၀င်မြည်းပေမဲ့ ဒီလူကြီး ချက်တာတွေတော့ သွားရည်ကျစရာ ကောင်းလောက်အောင် မွှေးကြိုင်နေသော်လည်းပဲ အမြင်ကပ်နေတဲ့ ပုဒ်မကြောင့် ဘယ်တော့မှ မစားဘူး။ သူတို့က စနေ၊ တနင်္ဂနွေဆိုရင် ၂ယောက်သား မီးဖိုဆောင်မှာ ချက်ကြ၊ ပြုတ်ကြ။ အဲ... စားပြီးသောက်ပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ ၂ယောက်သား ရွှေလက်တွဲပြီး အပေါ် ထပ်က စံနန်းဆီကို မြန်းကြပေါ့။ ဒါကို ကြည့်ပြီး ကိုယ်တို့က မေးငေါ့... ကျန်ခဲ့ကြ...။
တနေ့သော နေ့လည်ခင်း မီးဖိုဆောင်ထဲမှာ ကိုယ်၁ယောက်ထဲ သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေတုန်း ရုတ်တရက် ဟယ်လို ဆိုတဲ့ ကြားဘူးနေကြ အသံသဲ့သဲ့ လေးပေါ်လာလို့... တံခါးဝ ထွက်ကြည့်တော့.... မြတ်စွာဘုရား..ကယ်တော်မူပါလို့ အော်လိုက်မိမတတ် အတော်ကြာအောင် ပျောက်နေတဲ့ ကိုယ်တို့ မင်းသားတရုတ်လေးကို ထုံးစံအတိုင်း ရှက်ကိုးရှက်ကန်း အပြုံးတစုံနဲ့ မားမားကြီး တွေ့လိုက်ရတယ်။ သူက ထုံးစံအတိုင်း သူ့ကောင်မလေးရှိလားလို့ ကိုယ့်ကို မေးနေတယ်။ ကိုယ်ဘာပြန်ပြောရမယ်မှန်းမသိဘူး...။ မရွှေစာက အပေါ် မှာ ဟိုလူကြီးနဲ့...။ ကိုယ်က ထိတ်လန့်တကြား ပြာယာတွေခတ်ပြီး... ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမယ်မှန်းမသိ... ဘာပြောရမယ်မှန်းမသိ...။ သူ့ကို ခဏလို့ လက်ကာပြပြီး ယောင်တောင်တောင်နဲ့ အခန်းထဲက ကိုယ့်သူငယ်ချင်း၂ယောက်ကို ... ဟဲ့...ဟဲ့... လုပ်ကြပါဦး... ဟို ကောင်လေးလာနေတယ်...။ ဟိုကောင်လေးလာနေတယ်လို့ ခပ်အုတ်အုတ်အော်ပြောမိတယ်။
ကိုယ့်သူငယ်ချင်း၂ယောက်ကလည်း အခန်းထဲက ချက်ချင်းဆိုသလို ထွက်လာကြပြီး ... ဟဲ့ မိစု...ခေါ်မပေးနဲ့... အပေါ်တက်သွားလို့ ပြောလိုက်..ပြောလိုက်...အပေါ် ကို သူ့ဖာသာတက်သွားပစေ... လို့ဆိုပြီး... တရုတ်မကို အမြင်ကတ်နေသူများပီပီ ၀ိုင်းပြောကြတယ်။ တရုတ်လေးက ကိုယ်တို့ပြောနေတဲ့ အသံတွေကို ကြားနေရတယ်။ ဘာတွေပြောနေကြမှန်းတော့ သူမသိပေဘူးပေါ့...။ ကိုယ်ကတော့ တရုတ်လေးကို မမြင်သင့်တာ မမြင်ရအောင်...ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ... အနည်းဆုံး မမြင်ရတော့ စိတ်သက်သာတာပေါ့လို့ တွေးမိပြီး... ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေ တားတဲ့ ကြားက တရုတ်မလေးနံမည်ကို အာပြဲကြီးနဲ့ အော်ခေါ်... ဧည့်သည် ရောက်နေတယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့ကို ဟန်ဆောင်ပြုံး... ပြုံးပြရင်း... မတော်... သူအပေါ်တက်သွားမှာစိုးလို့... စကားမရှိစကားရှာ... မတွေ့တာကြာပြီနော်လို့ ပြောတော့...သူက ...သူ.. တရုတ်ပြည်ကို ပြန်နေတာ လို့ ပြောတယ်။ မနေ့ကမှ ပြန်ရောက်သတဲ့...။ အဲဒီအချိန်မှာ မရွှေစာက လှေကားကနေ တဒိုင်းဒိုင်းနဲ့ ပြေးဆင်းလာပြီး တရုတ်လေးတွေ့တော့ အနည်းငယ် မှင်သက်တဲ့ ပုံနဲ့ လှမ်းကြည့်တယ်။ ပြီးတော့...သူတို့ ၂ယောက် တံခါးဝမှာပဲ ရပ်ပြီး ဘာတွေ ပြောကြလဲ မသိဘူး။ ပုံစံကတော့ ကိုယ်တို့ တရုတ်လေး ရင်ဝကို ခြေနဲ့ ဆောင့်ကန်တဲ့ စကားမျိုးတွေ ဖြစ်မှာပေါ့။ အတန်ကြာတော့ မီးဖိုဆောင်ပြူတင်းကနေ လှမ်းအကြည့် နှေးကွေးတဲ့ ခြေလှမ်းတွေနဲ့ ခေါင်းငိုက်စိုက်ချပြီး လှည့်ပြန်သွားတဲ့ ကိုယ်တို့ တရုတ်လေး နောက်ကျောကိုပဲ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ လှမ်းမြင်လိုက်ရတော့တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာတော့ ခုနကတဲက လှေခါးမှာ ချောင်းနားထောင်နေတဲ့ ကိုပုကွနဲ့ မရွှေစာတို့ကတော့ Fridge ထဲက အအေးဗူးတွေယူပြီး အပေါ် ထပ်ကို ဟီးဟီး ဟားဟားနဲ့ ပြန်တက်သွားလေရဲ့....။
အော်...မေ့လို့...ပြောစရာ တခုကျန်သွားတယ်...။ အဲဒီ...ကိုပုကွက တရုတ်ပြည်မှာ... မိန်းမနဲ့ ကလေးတွေ ရှိသတဲ့...။
Posted by စုချစ် at 10/03/2008 03:44:00 PM No comments: